TTSweet: October 2009
မဆွိတီတို့အမျိုး အစ်မ တစ်ယောက် ပြောပြတာလေး ဖောက်သည်ချရဦးမယ် ...
အဲဒီအစ်မ အိမ်ထောင်ကျတော့ သျှောင်နောက်ဆံထုံးပါ ယောက္ခမများအိမ်မှာ လိုက်နေပါတယ် ...သူတို့အိမ်က သားသမီးတွေထဲမှာ ပထမဆုံးအိမ်ထောင်ပါ ... ... ယောက်ခမ အမကြီးက စကားပြောရင် အားရပါးရ တုတ်ထိုးအိုးပေါက် ပြောတတ်ပေမဲ့ စိတ်ရင်းအလွန်ကောင်းသူပါတဲ့ ... အစ်မကလဲ သဘောကောင်းတော့ ယောက်ခမတွေက သမီးအရင်းနဲ့မခြား ချစ်ကြပါတယ် ...
အိမ်ထောင်သက် တစ်နှစ်ခွဲလောက်နေတော့ သားယောက်ျားလေး တစ်ယောက်ဖွားပါတယ် ... မြေးဦးဆိုတော့ အဖိုးအဖွားတွေရော အတူနေ ဦးလေး၊ အဒေါ်တွေရော ချစ်လိုက်ကြတာ ... တုန်လို့ ...
ခလေးတစ်နှစ်လောက်မှာ မမျှော်လင့်ပဲ နောက်ထပ်ကိုယ်ဝန် ရှိလာပြန်ပါတယ် ...
သားလေးရပြီးသားဆိုတော့ သမီးလေးလိုချင်တာပေါ့လေ ... အဖိုး၊ အဖွားတွေကလဲ
ဒီတစ်ခါတော့ မြေးမလေးချီချင်တယ်လို့ ချည်းပြောနေတော့တာပဲ ... အဖွားလုပ်သူကအဆိုးဆုံး ... ဒီလိုနဲ့ ၉လလွယ် ၁၀လဖွား ... မွေးလာပြန်တော့ ယောက်ျားလေး ... အော် ... ရှင်၂လောင်းရတာပေါ့ ဆိုပြီး အဖွားလုပ်သူ ဖြေရှာပါတယ် ...
အစ်မခင်မျာလဲ တော်တော်နဲ့ ခလေးမယူရဲတော့ဘူး ... အဲလိုနဲ့ နောက်ခလေး အငယ်ကောင် ၃-၄နှစ်လောက်ရလာတော့ အစ်မကစိတ်ကူးယဉ်ပါတယ် ... သမီးမိန်းကလေးမွေးရင် ... ဘယ်လို အ၀တ်အစားလေးတွေ ဆင်မယ်ပေါ့ ... မိန်းကလေးဆိ်ုတော့ တီတီတာတာ ပိုပြောတတ်မယ် ... ပိုချစ်စရာလေးနေမယ်ဆိုပြီး စိတ်ကူးနဲ့ရူးရတာ ... ယောက္ခမတွေကလဲ မြေးမလေးတစ်ယောက်တော့ ချီချင်ပြီဟေ့ ဆိုတာနဲ့ ခလေးထပ်ယူပါတယ် ...
အဲဒါနဲ့ပဲ ခလေးမီးဖွားမဲ့နေ့ရောက်လာပါပြီ ... တောဓလေ့ထုံးစံအတိုင်း အိမ်မှာပဲ သူနာပြုဆရာမနဲ့ ခေါ်မွေးပါတယ် ... မီးဖွားဖို့ ပစည်းတွေ ပြင်ဆင်ပြီး မွေးနေရင်းကနေ ဆရာမပုံကြည့်ရတာ ဇောချွေးတွေ ပြန်နေပါတယ်။ နောက်မှ မျက်စိပျက်မျက်နှာပျက်နဲ့ ဘေးကစောင့်နေတဲ့ ယောက်ခမကြီးကို
အမ်မာလေး ... ၂ယောက်ပူးကြီးတောင်တော့ ... ကျမတစ်ယောက်တည်းမနိူင်ဘူး ဆိုပြီး ပြောပါတယ် ။ ယောက်ခမကြီးက "အမွှာတဲ့ဟေ့ ဆရာမတစ်ယောက်ထပ်ခေါ်ချေကြစမ်း " ဆိုတော့မှ မျက်မှောင်ကျုတ်ကြီးနဲ့ မီးနေခန်းနားမှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်စောင့်နေတဲ့ မောင်အငယ်ဆုံး၊ ရုပ်အဆိုးဆုံးလေးက စက်ဘီးနဲ့ပြေးပြီး ဆရာမနောက်တစ်ယောက်ကို သွားခေါ်ရပါတော့တယ် ...
အဲလိုနဲ့ ဆရာမနှစ်ယောက်တက်ညီလက်ညီနဲ့ မွေးလိုက်ကြတာ ပထမတစ်ယောက်ထွက်လာပါတယ် ... ယောက်ကျားလေးပါရှင် ... အဖွားလုပ်သူခမျာ အဲဒီခလေးလေးကြည့်ပြီးတော့ မူးလဲမတတ်ပါပဲ ... နောက်တစ်ယောက် ထပ်ထွက်လာတော့ မိန်းကလေးများဖြစ်မလားလို့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ကြည့်နေတဲ့ အဖွားက ထွက်လာလာချင်း စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့ အော်ပြောလိုက်တာက “ အောင်မလေးတော့ ... ထွက်လာလိုက်ကြတာ ... သောက်ကျားတွေချည်းပဲ ...” တဲ့ ... အဲလိုအော်ပြောသံကြားလိုက်ရတဲ့ ခလေးအမေခမျာလဲ မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်လို့ မီးတွင်းထဲမှာတင် သတိလစ်သွားလို့ သူနာပြုဆရာမတွေ သတိရလာအောင် မနဲလုပ်လိုက်ရပါသတဲ့ ...
ဇာတ်လမ်းကမပြီးသေးပါဘူး ... အဲဒီယောက္ခမတွေရဲ့ ဒုတိယသားအငယ်ကလဲ မရှေးမနှောင်းအိမ်ထောင်ပြုတာ ကလေး ၅ ယောက်သာ မွေးလားပါတယ် ... အားလုံးက ယောက်ကျားလေးတွေချည်းပါပဲ ... ယောက်ခမတွေခမျာမလဲ မြေးမိန်းခလေးပါနိုးပေါ့ ... စောင့်လိုက်ရတာ ...တစ်ယောက်မွေးတိုင်း မျှော်လင့်ချက်တွေအပြည့်နဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ရူးရတာ ... အကျားတွေချည်းပဲ ၉ယောက်တောင် ...
နောက်ဆုံး မျက်မှောင်ကြီး အမြဲကျုတ်နေတတ်တဲ့ သား အငယ်ဆုံး ရုပ်အဆိုးဆုံးလေး အိမ်ထောင်ကျမှသာ သမီးလေးတစ်ယောက် မွေးပါတော့တယ် ... အဲဒီသမီးလေးက အကိုဝမ်းကွဲ ၉ယောက်တောင်ရှိပါသတဲ့ရှင် ... သူ့အကိုတွေကလဲ နှမလေးတစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ နှမထိဓါးကြည့် အလွန်ချစ်ကြပါတယ် ...
အဲဒီသမီးလေးဟာ စလုံးမှာနေတဲ့ ဂျူနီယာခြိမ့် (ခေါ်) ဂျူဂျူလို့ ချစ်စနိုးခေါ်တဲ့ ကောင်မလေး ဖြစ်လာပါတယ် ...
သူနာပြုဆရာမသွားခေါ်ပေးတဲ့ မောင်အငယ်ဆုံး မျက်မှောင်ကျုတ်လေးက ကြီးလာတော့ " စင်္ကာပူမှာ ... ဘာလုပ်လိုပါလျင် ... ညာလုပ်လိုပါရင် " ဆိုပြီး စာတွေရေးရေးနေတဲ့ ၀ူးမောင်ခြိမ့် ဆိုတာဖြစ်လာပါသတဲ့ ...
ဇာတ်လိုက်အစ်မကြီးကတော့ အခု ဂျူဂျူလေးကို ထိမ်းနေတဲ့ သူ့ဂျီးတော်ကြီးပါ ....
သူ့ခမျာလဲ အခုမှသမီးမိန်းကလေး ထိမ်းရတာဆိုတော့ သမီးလေးကို သိပ်ချစ်ရှာပါသတဲ့ရှင်။
Posted by T T Sweet at 3:49 PM 8 comments: Links to this post
အညွှန်းဆိုတော့ ကိုယ်ကြိုက်တာလေးတွေ၊ ကောင်းမယ်ထင်တာလေးတွေ ကို သူများတွေကို မျှဝေရတာပါ။ အကြိုက်ချင်းများ မတူခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါကုန်။
မနေ့ညက အိမ်မှရှိနေတဲ့ အခွေတွေထဲက God father (ပထမပိုင်း) အခွေ ကို ပြန်ကြည့်မိပါတယ်။ ငယ်ငယ်က အဖေတို့ပြောတာ ကြားဖူးနေပေမဲ့ ငယ်သေးတော့ စိတ်မ၀င်စားမိဘူး။ ကိုယ့်အိမ်ကလူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျတော့ သူက အဲဒီကားကြိုက်တယ်ဆို DVD ၃ခွေလုံး အိမ်မှာဝယ်ထားတာ။ ကိုယ်လဲသူနဲ့ကြည့်ရင်းနဲ့ အဲဒီကားကို တော်တော်ကြိုက်သွားတယ်။ ပထမတော့ ဇာတ်ကြမ်းကားထင်တာ။ သူက ဒွန်မိုက်ကယ်ရဲ့ မိသားစုဘ၀၊ အချစ်ဇာတ်လမ်း နဲ့ အတူ မာဖီးယား ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းတွေရဲ့ လက်ရဲဇတ်ရဲတာတွေကို ရောမွှေပြသွားတာပါ။
မာလွန်ဘရန်ဒို အသံပြာပြာကြီးနဲ့ ရုပ်တည်ကြီးလုပ်ပြီး စကားပြောတဲ့ အခန်းတွေ၊ မိသားစု ပြသနာတွေကို ညီအစ်ကိုတွေ စုပြီးဖြေရှင်းတာတွေ၊ ညီအကို အချင်းချင်းတောင်မှ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စရိုက်မတူတာတွေ ပြသွားတာ အပြင်မှာ တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အလား သရုပ်တွေ အတော်ပီပါတယ်။ Don Michel အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ အယ်ပါစီနိူကို ချောလွန်းလို့လားမသိ ၊သရုပ်ဆောင်တာကိုလဲ တော်တော်သဘောကျမိပါတယ်။
" ကောင်မလေး ငါ့ကို ကြိုက်တယ်ခိုက်တယ် ... ဆိုပြီးတော့ " ဆိုတဲ့ ကြိုးကြာတို့ အခုဆိုနေတဲ့ သီချင်းဟာ အဲဒီ God father ဇာတ်ကားရဲ့ နာမည်ကြီး ဇာတ်ဝင်သီချင်းရဲ့အလိုက်ပါ။ The God Father ပထမပိုင်းရော၊ ဒုတိယပိုင်းရော အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ကား အော်စကာဆုတွေ ရခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၂ နဲ့ ၁၉၇၄ နှစ်တွေအတွက် ရခဲ့တာပါ။ တတိယပိုင်းကတော့ ၁၉၉၀မှ ထပ်ရိုက်ခဲ့ပြီး ပထမ၂ကားလောက် အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူး။
အမေရိကန် မြေအောက် မာဖီးယားဂိုဏ်းတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဘ၀ မိသားစုအကြောင်းတွေကို သဘာဝကျကျရိုက်ပြနိူင်တဲ့ ကမ္ဘာ့ရုပ်ရှင်လောကက နာမည်ကြီး The God Father ကို ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ကြဖို့ ညွှန်းလိုပါတယ်။ ဆိုင်တွေမှာတော့ အခွေတွေရှိပါတယ်။ Classic ထဲမှာရှာပါ။
Rapid Share Account နဲ့ ရုပ်ရှင်များ
နိူင်ငံခြား ရုပ်ရှင် ကြိုက်တတ်သူတွေအတွက် အွန်လိုင်းကနေ ရုပ်ရှင်တွေ ဒေါင်းကြည့်ချင်ရင် အကောင်းဆုံး web site လေးပါ။ ရက်ပစ်ရှဲ အကောင့်ကို ၀ယ်ထားရင် ရုပ်ရှင်ပေါင်းများစွာကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး ကြည့်နိူင်ပါတယ်။ TV series တွေ၊ Game တွေများစွာလဲ ဒေါင်းလို့ရပါတယ်။ ၆လစာကိုမှ စလုံး ၆၈ကျပ်လောက်ပဲ ပေးရပြီး သူငယ်ချင်း၂ယောက် ၃ယောက်လောက် ရှယ်သုံးရင် အလွန်သက်သာပါတယ်။ တစ်ရက်ကို ၅ဂစ်ဒေါင်းလို့ ရပါတယ်။ အဲဒါမပြည့်ရင် နောင်လစ်မစ်ကို ထပ်ပေါင်းထည့်ပေးတယ်။ ငွေကိုတော့ bank transfer နဲ့ သွားရင်သွား ဒါမှမဟုတ် ခရက်ဒစ်ကတ် ရှိရင် paypal နဲ့ လွှဲရင်လဲရပါတယ်။
*****အထူးသတိ ။ ဒီ web site က တရားဝင် မဟုတ်တဲ့အတွက် စလုံးလို နိူင်ငံမှာတော့ အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အော်ဇီိလို၊ US လို၊ အင်ဂလန်လိုနိူင်ငံတွေမှာတော့ တရားဝင်သုံးလို့မရပါ။ သွားဝင်လိုက်ရင် အင်တာနက်ကို ဖြတ်ချတာမျိုး ကြုံဘူးပါတယ်တဲ့။
ကိုရီးယားကားကြိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ်များ သိပြီးသားဖြစ်နေမလား။
ကိုးရီးယားကားများ၊ ဇာတ်လမ်းတွဲများကို ကြည့်လိုတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က မိုင်ဆိုဂျူး ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် web site လေးကို
၀င်ကြည့်ကြပါ။ ကိုယ်လဲ ဟိုးတစ်ခေါက် မြန်မာပြည်က အလည်ပြန်လာတော့ လူပြောများတာနဲ့ ဒါရိုက်တာရင်တို့၊ အွန်စောတို့၊ ဘွန်စောတို့ကြည့်ချင်တာ ခုမှပဲ တွေ့တော့တာ။ ဂျပန်ရုပ်ရှင်၊ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ ဟောင်ကောင် တရုတ်ကားတွေလဲ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြည့်ဖို့ အစုံဆုံးနဲ့ အကြိုက်ဆုံး web site လေးပါ။
စွယ်တော်ရိပ် သကြန် ၂၀၀၉
ဟိုးအရင် သကြန်အချိန်က " EX-RITသင်္ကြန် ဖြေဖျော်ပွဲ " ဆိုပြီး ညွှန်းခဲ့တာလေး သတိရကြမှာပါ။ အခွေထွက်နေတာကြာပါပြီ။ အိမ်မှာတော့ ၀ယ်ထားပါတယ်။ ခု myanmarpioneer ဆိုတဲ့ web site မှာ တင်ထားပါတယ်။ သွားကြည့်ကြပါဦးနော်။ "ခွေးတို့ရွာ " ဆိုတဲ့ ရယ်ရတဲ့ ဇာတ်ထုတ်လေးကတော့ ဆင်ဆာထိလို့ ပါမလာခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အငြိမ့်က အရမ်းရယ်ရပါတယ်။ ခါးအောက်ပိုင်း ပျက်လုံးအချို့ပါပေမဲ့ အားလုံးခြုံပြောရင် ကြည့်သင့်တဲ့ အခွေလေးပါ။
online မှာ ခင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း မလေဒီမှ ready made အထုတ်လေး ပေးလာလို့ ချက်စားဖြစ်ပါတယ်။ မာလာဟင်းဆိုကြားသာကြားဖူးတာ တစ်ခါမှမစားဘူးလို့ ခုတော့ ကိုယ့်အကြိုက် အစားအသောက်တစ်ခုတိုးရတာပေါ့။
သူက တရုတ်ပြည် ဇီချွမ်က မာလာမျင့်ဆိုတဲ့ ခေါက်ဆွဲ အစပ်ကနေ မြန်မာပြည်ထဲ ရောက်လာပြီး မာလာဟင်းဆို နာမည်ကြီးလာတာထင်ပါရဲ့။
အသီးအရွက်တွေ အများကြီးနဲ့ ခေါက်ဆွဲ အမျိုးပေါင်းစုံပါပြီး မြန်မာပါးစပ်နဲ့အကိုက်ခပ်စပ်စပ်ဆိုတော့ လေးဆိုတော့ ကြိုက်ကြတာ မဆန်းပါဘူး။ (ချက်နည်း ကိုနောက်မှ အရှည်ရေးပါတော့မယ် )
youtube မှာ ဟိုတလောက hit ဖြစ်သွားတဲ့ ဗွီဒီယို လင့်လေးပါ။ ခုထိ လူပေါင်း သန်း၃၀နီးပါး လာကြည့်သွားကြပါပြီ။ မင်္ဂလာဆောင်မှာ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီးအပါအ၀င် တက်ရောက်တဲ့ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုများပါ ပါဝင်ကပြဖြေဖျော်သွားတဲ့ ပျော်စရာ မင်္ဂလာပွဲလေးပါ။ သူတို့တွေကြည့်ပြီး အပျော်တွေ ပါ ကိုယ့်ဆီကူးစက်လို့။
Posted by T T Sweet at 7:16 PM4comments: Links to this post
ဟိုတလောက မဆွိတီတို့အိမ်မှာ ကြက်သားပလာတာ ချက်စားကြတယ်။ ကြက်သားပလာတာချက်ရတာ လွယ်လို့ တော်တော်များများ သိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိုနိူင်ငံရပ်ခြားမှာ နေသူ တကိုယ်တည်း လူလွတ်တွေ မချက်တတ်ဘူးပြောလာလို့ မဆွိတီရဲ့ ချက်နည်းလေးကို ရှယ်လိုက်ပါတယ်။ ဗမာလို အလွယ်ပဲချက်တာမှို့ ဒိန်ချဉ်တွေ ဘာတွေတော့ မထည့်ပါဘူး။ မဆလာအစား ဇီယာမှုန့်ကို သုံးပါတယ်။ ဇီယာမှုန့်ချည်း သတ်သတ်အနံ့ကို ပိုကြိုက်လို့ပါ။ ဇီယာကို Cumin လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ ဆိုင်လေးတွေမှာဖြစ်ဖြစ်၊ NTUC မှာဖြစ်ဖြစ် Cumin powder ဆို ရှာဝယ်ရင်ရပါတယ်။
သုံးတဲ့ spices လေးတွေ
ကရဝေးရွက် (Indian bay leaves, Cinnamomum)
လူ ၈ယောက်စာခန့် ပြင်ဆင်ရန်
ကုလားပဲနို့ဆီတစ်ဗူးခွဲလောက်ကို ညကတည်းက ရေစိမ်ထားပါတယ်။
မနက်မိုးလင်းတော့ ကုလားပဲကို နူးအိနေအောင်ပြုတ်ပါတယ်။
ကြက်တစ်ကောင် ၀ယ်ပြီး အတုံးခပ်ကြီးကြီး ဆိုင်မှာ တုံးခိုင်းပါတယ်။ ကုလားပဲအိုးထဲချိုအောင် ကြက်ခြေထောက်ရိုးတွေလဲ ၀ယ်ခဲ့သေးတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ ကြက်သားကို အရိုးတွေရောအသားတွေရော ရောရက် ဆား၊ဆနွင်း၊ သကြား၊ ပဲငံပြာရည် အကြည်ရည်၊ ဇီယာမှုန့်တို့နဲ့နယ်ပြီး ဆားပြားဝင်အောင် နာရီဝက်လောက် နှပ်ထားပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူ ၁၀မွှာလောက်၊ ဂျင်း တစ်လက်မလောက်၊ ကြက်သွန်နီဥကြီး ၂ဥလောက်ကို ပါးပါးလှီး အားလုံးထောင်းပါတယ်။ blender နဲ့ကြိတ်လဲရပါတယ်။
သစ်ဂျပိုးခေါက်(cinnamon) ကရဝေးရွက်၊ ဇီယာမှုန့်၊ အရောင်တင်မှုန့်တို့ကို လဲ ဆီသတ်ဖို့ အဆင်သင့်ပြင်ထားပါတယ်။
ထောပတ် (Ghee) နဲ့ ဆီ ဇွန်းကြီး ၂ဇွန်းလောက်စီကိုလည်း အဆင်သင့်ပြင်ထားပါတယ်။ ထောပတ်မရှိလဲ ဆီနဲ့ချည်းလည်းချက်လို့ရပါတယ်။ စလုံးမှာတော့ NTUC မှာ ထောပတ်ဝယ်လို့ရပါတယ်။
အာလူးအလုံးကြီး ၃-၄လုံးလောက်ကိုလည်း အခွံနွှာ၊ အတုံးကြီးကြီး တုံးပြီး ဆား၊ဆနွင်းတို့နဲ့နယ်ထားပါတယ်။
မီးအနေတော်ပေါ် ဒယ်အိုး (သို့) ဒန်အိုးတယ် ဆီထည့် ဆီကျက်ရင် အာလူးတုံးထားတာတွေ အရင်ကျက်အောင်ထည့်ကြော်လိုက်ပါ။ အာလူးက ချက်ရင် ကြာလို့ အဲလိုဆီထဲ ထည့်ကြော်လိုက်ရင် အကျက် အလွန်မြန်ပါတယ်။ အာလူးအပေါ်အရေခွံတင်းပြီး ကျက်သွားရင် အသာ ပြန်ကော်ထားပါတယ်။
ခုနက ဆီအကျန်ထဲကို ထောပတ်ထပ်ထည့် ဆီကျက်ရင် ခုနက ဂျင်း၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ အနီထောင်းထားတာ အရင်ထည့် ၊ ကျက်ခါနီးရင် သစ်ကြမ်းပိုးခေါက်၊ ကုလားဝေးရွက်၊ ဇီယာမှုန့် တို့ကိုထည့်မွှေးလာပြီး ရွှေဝါရောင်သန်းလာရင် ငရုပ်သီး အရောင်တင်မှုန့် တစ်ဇွန်လောက်ခပ်မွှေပေး၊ ကြက်သားထည့်ပြီး မကပ်အောင်ထပ်မွှေပေးပြီး ကြက်သားကို ဆီသတ်ပါ။ ကြက်သားအတော်မွှေးပြီဆို ရေနဲနဲခပ်ပြီး အဖုံးလုံအောင်အုပ်၊ ကြက်သားနပ်ခါနီးရင် အာလူးထည့်ပြီး ကြက်သားရော အာလူးရောနပ်သည်အထိတည်ပါ။
ခုနကကုလားပဲကို ကြက်သားနဲ့ရောရင် ဆီတွေ စုတ်ပြီး ဆီပျောက်လို့ ဟင်းက ကြည့်မကောင်းလို့ ရောမချက်ပါ။ ကုလားပဲကိုလည်း ခုနက ကြက်သားဆီသတ်နည်းအတိုင်း မွှေးနေအာင်ဆီသတ်၊ ဟင်းချိုအောင် ကြက်သားဟင်းထဲက ကြက်ခြေထောက်ရိုးနဲ့ အရိုးအချို့ကို ကုလားပဲအိုးထဲပြောင်းထည့်ပြီး အချိုရည်ထွက်တဲ့ အထိတည်ပါတယ်။ အရည်အပျစ်အကျဲကတော့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ချက်ပါ။
အချဉ်အတွက်တော့ သခွါးသီး၊ ကြက်သွန်နီ၊ ပူတီနာရွက်၊ငရုပ်သီးစိမ်းတို့ကို ပါးပါးလှီး၊ သံပုရာရည်၊ ဆားတို့နဲ့ နယ်ပါတယ်။
ပလာတာကတော့ NTUC ကနေ Ready made အထုတ်ကြီးတစ်ထုတ်ဝယ်ပြီး Non-sticker ဒယ်အိုးနဲ့ ဆီပါလေကာထည့် မီးအေးအေးနဲ့ တစ်ချပ်ချင်းကြော်ပါတယ်။ တစ်ထုတ်ကို အခု၃၀ ပါပါတယ်။
အဲလိုစားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ ... အနီးကပ်ကြည့်ချင်ရင် ... ရဲရဲကြီးသာနှိပ်လိုက်ပါ ... ပုံတွေကို။
Posted by T T Sweet at 3:29 PM 8 comments: Links to this post
Labels: (၁-၁၁) ကြက်သားပလာတာ, (၁) မြန်မာ အစားအသောက်များ ***
ဂျူဂျူ ၄ နှစ်တုံးက ရိုက်ထားတဲ့ ဗွီဒီယို ကလစ်လေးပါရှင်။
နောက်ခံစကားပြော ဂျူဂျူ့ ကြီးတော်
Posted by T T Sweet at 12:50 AM9comments: Links to this post
ဟိုတစ်လောကပေါ့။ ဟိုတစ်လောကဆိုပေမဲ့ ကြာတောင်ကြာနေပါပြီ ။ Ice age (III)(Dawn of the Dinosaurs) ရုံတင်တုံးက သားအမိသားအဖတွေ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြတယ်။ ရုံရောက်တော့ ဖအေလုပ်သူက Transformers ကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီး တခြားရုံကူးသွားတယ်။ မဆွိတီတို့သားအမိ၂ယောက်က တစ်ရုံပေါ့ ။ မဂျူဂျူကတော့ ပထမဆုံးသူ့ကို သေချာလိုက်ပြတာဆိုတော့ သူ့ကိုယ်သူ လူကြီးဖြစ်ပြီ လူရာဝင်ပြီလို့ ထင်နေတယ်။ ရုံထဲမ၀င်မီ တစ်တောင်နီးပါးလောက်ရှိတဲ့ ပေါက်ပေါက်ပုံးကြီးကိုင်ပြီး ပြုံးပြုံး ... ပြုံးပြုံးနဲ့ ကျေနပ်နေပုံများ မြင်စေ့ချင်တယ်။
အထဲရောက်တော့လဲ သူမမြင်ဘူးတာတွေကို တတွတ်တွတ် အမေကို မေးတော့တာပဲ။ နောက်ရုပ်ရှင်စပြ၊ ကြော်ငြာကားတွေထိုးတော့ သူအဲဒီကားတွေလာလဲ ကြည့်ဦးမှာနော်တဲ့။ ခုထဲက စရံက သတ်နေပြီ။ အဲဒါဆိုလဲ သမီး ရုပ်ရှင်နာမည်တွေ သေချာမှတ်ထားနော်။ နောက်ရုံတင်ရင်ကြည့်ရအောင် ဆို ပြောရတယ်။ ကြော်ငြာကားတွေထဲမှာ မျက်လုံးကြယ်သီးနဲ့ အရုပ်မကားလေးပြတယ်။ အမေလုပ်သူရဲ့ မျက်လုံးက ကြယ်သီးနဲ့လုပ်ထားတာ။ သမီးက ရိုးရိုးမျက်လုံးပဲဆိုတော့ အရုပ်မလေးကို သူ့သမီးမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောနေတဲ့ အခန်း။ ဇာတ်လမ်းလေးက စိတ်ဝင်စားစရာလေး။ သနားစရာလေး။ ကားနာမည်က Coroline တဲ့လေ။ သမီးကို သေချာမှတ်ခိုင်းထားရတယ်။
ဒါနဲ့ကားကြီး စပြတော့လဲ သူအတော်ကိုသဘောတွေ့ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကလဲ တော်တော်ကောင်းကိုး။ သူ Ice age (I) ကို ကြည့်တုံးက ၃-၄နှစ်လောက်ပဲ ရှိသေးတာ။ အဲဒီကတည်းက အထဲက ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ ရင်းနှီးနေတာ။ အဲဒီတုံးက ကျားကြီး ဒီရေဂိုးက ခလေးကို စားဖို့လှမ်းခုန်အုပ်လိုက်တဲ့ အခန်းဆို သူ့မှာငိုလိုက်တာ။ sid နဲ့ တခြားတိရိစ္ဆာန်တွေ ရေခဲပြင်ပေါ် လျှောစီးတော့လဲ သဘောတွေကျလို့။
ဒီ Ice age (III) မှာတော့ ခလေးအရမ်းချစ်တဲ့ ခပ်ပျော်ပျော် လူပျိုကြီး sid က ဒိုင်နိုဆောလေး ၃ကောင်ကို မွေးစားထားတာ။ ခလေးအမေ ဒိုင်နိုဆောမကြီး သူ့ခလေးတွေကို ပြန်ခေါ်ရင်းနဲ့ sid က ရောပါသွားတယ်။ sid ကို ဆင်ကြီးတို့ ဇနီးမောင်နှံနဲ့တကွ ဒီရေးဂိုးတို့က လိုက်ကယ်တဲ့ တောတွင်းဇာတ်လမ်းပေါ့။ ဆင်မလေးကလဲ ကိုယ်ဝန်နဲ့ နေ့စေ့ လစေ့ကြီး။ ခလေးမွေးတော့ ကျားကြီး ဒီရေဂိုးက မီးနေစောင့်ရတဲ့ အခန်းဆို ရယ်နေရတယ်။ မိဘမေတ္တာ၊ မိသားစုဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေဆိုတာ၊ သူရဲကောင်းဆိုတာ အစရှိသဖြင့် သူ့နေရာနဲ့သူ သရုပ်ဖော်သွားတာ ခလေးတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ ကားလေးပါ။
သမီးဂျူဂျူကတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကြောက်စရာ အခန်းဆို မျက်နှာကို လက်ဝါးလေးနဲ့အုပ်။ ရယ်ရတဲ့ အခန်းဆို ပါးစပ်လေးကို လက်နဲ့ အသာကာပြီး ခိုးခိုးခစ်ခစ်ရယ်လို့။ အမယ် ... သူ့ရယ်သံက အိမ်မှာ TV ကြည့်ရင် ရယ်တဲ့ အသံနဲ့တောင် မတူဘူးရယ်။ သူလဲဇာတ်လမ်း နားလည်တယ်။ အများနည်းတူ သူလဲ လူရာဝင်ပြီဆိုတဲ့ သဘောမျိုး။ တစ်ခါတလေ လုပ်ရယ်လေး၊ ဘေးကကြားရအောင် ခပ်ကျယ်ကျယ်လေးပါဗျား။ တစ်ခါတစ်လေ သူ့ရယ်သံတစ်ခုတည်း အကျယ်ကြီး ထွက်လာသေးတယ်။
ရုပ်ရှင်သာပြီးသွားတယ် သူ့ခမျာ ပြန်ချင်ပုံမရဘူး။ သမီးဟာ ဒီလို ပေါက်ပေါက်လေး စားလိုက်၊ အအေးလေး သောက်လိုက်နဲ့ ဆေးရောင်စုံ မြင်ကွင်းကျယ်ကြီးနဲ့၊ အသံ effect တွေနဲ့ ၊ အဲကွန်းခန်းထဲ ကြည့်ရတာကို သူအရမ်းကိုကျေနပ်နေတာ။ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ကြည့်ဖို့ကလဲ တစ်လမ်းလုံး တတွတ်တွတ်နဲ့ ပြောလို့။ သမီးပျော်တော့ အမေလဲပျော်ပေါ့။
နောက်တစ်ပတ်ကျတော့ အဲဒီ ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ shopping centre မှာပဲ သားအမိနှစ်ယောက် KFC သွားစားကြတယ်။ KFC ဆိုင်မှာလဲ ရုပ်ရှင် ပရိုမိုးရှင်းဆိုပြီး ခလေးပရိတ်သတ်ကို ဆွယ်တဲ့အနေနဲ့ Ice age (III) ထဲက ဇာတ်ကောင် အရုပ်ကလေးတွေကို kids meal ၀ယ်ရင် လက်ဆောင်ပေးတယ်။ ခလေးပရိတ်သတ်ကလဲ လာသူတိုင်း အရုပ်ကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးကြတာချည်း။ မဂျူဂျူတို့လဲ ဘယ်နေမလဲ။ ခါတိုင်းစားနေကျဟာ မစားပဲ အရုပ်လိုချင်တာနဲ့ပဲ ခြေကိုဆောင့်ပြီး မအေကိုပူဆာတော့တာပဲ။ အရုပ်ကတော့ ဒိုင်နိူဆော အဖြူရောင်လေးရတယ်။
စားသောက်နေရင်းနဲ့ သားအမိနှစ်ယောက် ဒိုင်နိုဆောရုပ်လေးကြည့်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ကားကို စမြုံ့ပြန်ကြပါရော။ "မေမေ ရှဉ့်က ရယ်ရတယ်နော် ... သူ့သစ်ကြားသီးကို သူ့ girl friend ဆီက လုစားတာ " " ဒိုင်နိူဆောလေးတွေက sid ကို သူတို့ မေမေလို့ ထင်နေတာ ... " အစရှိသဖြင့် ပြောနေကြရင်းနဲ့ မဂျူဂျူက " မေမေ ဟိုကားလာရင်လဲ ကြည့်ဦးမယ်နော် ..." တဲ့ ။ ဘာကားတုံးဆိုတော့ " မျက်လုံးမှာ ကြယ်သီးနဲ့ အရုပ်မကားလေ ... " တဲ့။ အဲဒီကား သမီးကို သေချာ မှတ်ခိုင်းထားတယ်လေ။ ကားနာမည် ဘာလဲဆိုတော့။ ဂျူဂျူ မမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့။ ဖြစ်ချင်တော့ မအေလုပ်သူကလဲ မမှတ်မိဘူး။ လူနာမည် ဆိုတာတော့ သိတယ်။ Catherene လား ... ဘာလားဆို ... လူနာမည်တွေ ၃-၄မျိုး တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရွတ်ကြည့်တော့လဲ ... ဟုတ်ဘူး ... ဟုတ်ဘူးနဲ့ ခေါင်းတရမ်းရမ်းနဲ့။ စဉ်းစားရတာ ဦးနှောက်ခြောက်နေကြပြီ။
နောက်ဆုံးတော့ မဂျူဂျူ မျက်လုံးလေးတောက်သွားတယ်။ သူအကြံရပြီဆိုပဲ။ ဒီကြော်ငြာတဲ့ကား နာမည်သိရအောင်များ သူဘာအကြံများ ရသတုံးဆို ကိုယ်တောင် အံ့သြနေတာ။ ဥာဏ်ကြီးရှင် မဂျူဂျူ ပြောလိုက်တာက
" အဲဒါဆိုလဲ ဂျူဂျူတို့ ခုအပေါ်တက်ပြီး အဲဒီကားပြန်ကြည့်ရအောင်လေ " တဲ့။
ကိုယ့်မှာ ရယ်လိုက်ရတာ။ ဘယ်အချိန်ထဲကများ ရုပ်ရှင်ပြန်ကြည့်ဖို့ ကြံနေတယ်မသိ။
Posted by T T Sweet at 5:30 PM7comments: Links to this post
စင်္ကာပူ မြန်မာသံရုံးလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ပါတ်သက်ပြီး မေးချင်နေသူများအတွက် (၃)
တစ်ချို့တွေက စင်္ကာပူမှာ တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး စုံတွဲလေးတွေ ရှိကြတာပေါ့။ အရင်တုန်းက တော့ စုံတွဲ က ရည်းစားဘ၀၊ သူလည်း အလုပ်လုပ် ကိုယ်က လည်း အလုပ်လုပ်ပေါ့။ နှစ်ယောက်သား ပိုက်ဆံတွေ စုကြ ပြီးတော့ လက်ထပ်လိုက်ကြပြီ ဆိုပါတော့။
နောက်တမျိုးက ကမြန်မာပြည်မှာကတည်းက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်လွန်းလို့ သက်သေ လက်မှတ်ထိုးထားပြီးသား နောက်မှ မိန်းမ ကလိုက်လာပြီး သူလဲအလုပ်လုပ် ကိုယ်ကလည်း အလုပ်လုပ် နှစ်ယောက်သား စီးပွားရှာကြတာပေါ့။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယောကျာ်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင် မိန်းမ က မှီခို လျှောက်လို့ ရတယ်လေ။ မိန်းမ မှ မဟုတ်ပါဘူး အသက် ၁၈ နှစ်ထက် ငယ်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်သားသမီးလည်း မှီခိုပဲပေါ့။ လွန်ခဲတဲ့ ၃-၄ နှစ် ကအထိ မှီခို လျှောက်ရတာ စွန့်စားခန်းပေါ့။ မှီခို မလျှောက်ခင်ကဆိုရင် ကျွန်တော် တို့မှာ လင်မယား ၂ ယောက်ပေါင်း တစ်လ ၃၀၀ နဲ့ တိုင်းပြည်ကို လှုဒါန်းနေတာလေ။ မှီခို လျှောက်တော့လဲ တကယ်စွန့်စားခန်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ အဲဒီလို မဟုတ်တော့ပါဘူး။ (၁) ကိုယ်နဲ့သူနဲ့ ပါတ်စပို့ မိတ္တူ (၂) လက်ထပ်စာချုပ် (စလုံးမှာ လက်ထပ်ရင် စလုံးက ပေးတာ၊ မြန်မာပြည်မှာလက်ထပ်ရင်တော့ နိုတြီပါ တွဲပြရတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ် (၃) ယောက်ျားလုပ်သူ နောက်ဆုံး လအထိ အခွန်ဆောင်ပြီးကြောင်း ထောက်ခံချက် တွဲပြပြီး မှီခိုလုပ်ပေးပါဆိုရင် လွယ်လွယ်ကူကူပဲ လုပ်ပေးပါတယ်။ ကဲ မလုပ်ရသေးသူတွေ လုပ်ကြနော်...
ဟာသ တစ်ခု ပြောပြအုန်းမယ်။.....
တကယ်တော့ ဟာသ ဆိုတာထက် ယူကြုံးမရ ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ အဖြစ်အပျက်လေးကို ကျွန်တော် ဒီမှာ ရေးပြပါမယ်။ ညီငယ်၊ ညီမငယ်များ နမူနာ အဖြစ် သိအောင်လို့ပါ။
လွန်ခဲတဲ့ တနှစ် အတွင်းက ကျွန်တော် သံရုံး ကို အခွန်သွားဆောင်စဉ်ကပေါ့။ ကျွန်တော်ရှေ့မှာ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ယောက် သံဝန်ထမ်းကို စကားပြောနေပါတယ်။ သူက သံဝန်ထမ်းကို ပြောနေတာကတော့ သူကိုယ်တိုင် အခွန်ဆောင်မယ်၊ သူ့ကောင်မလေးက ပထမအကြိမ် အခွန်ဆောင်ပါမယ်တဲ့။ သူကနေ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ပြနေတာ အကုန်ပါပါတယ်။ သူ့ကောင်မလေးရဲ့ အလုပ်ခန့်စာ မူရင်း အပါအ၀င် အကုန်ပြနိုင်ပါတယ်။ ခက်တာက သူ့ကောင်မလေး က လူကိုယ်တိုင်မပါဘူးပေါ့။ အဲဒီမှာ သံဝန်ထမ်းက မင်းက ဒီကောင်မလေးအစား အခွန်လာဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ မင်းနဲ့ ဘယ်လိုတော်စပ်သလဲလို့ မေးတဲ့အခါမှာ လူငယ်က ကျွန်တော် မိန်းမ ပါတဲ့။ အဲဒီမှာ သံဝန်ထမ်းက သဘောကောင်းစွာပဲ မင်းတို့ က လင်မယားဆိုရင် လက်ထပ်စာချူပ်ပြပါ။ လက်ထပ်စာချုပ်ပြရင် မင်းအမျိုးသမီးရဲ့ ပါတ်စ်ပို့ မှာ မင်းရဲ့ မှီခို ဖြစ်ကြောင်း ရေးပေးမယ် ငွေ ၁၅၀ ပဲ ပေး၊ နောက်ပိုင်း လတွေ မင်းအမျိုးသမီးအနေနဲ့ အခွန်ဆောင်စရာ မလိုတော့ဘူးလို့ သေချာစွာ ရှင်းပြပါတယ်။ ထိုလူငယ်က ချက်ခြင်းနားမလည်သေးလို့ ကျွန်တော်က ပါ ကြားဝင်ပြီး ရှင်းပြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ထိုလူငယ်က ပြန်ပြောတာကတော့ " ဟင့်အင်း... မှီခို မပြောင်းဖူး.. သူဘာသာ ပဲ အခွန် ဆက်ဆောင် ကျွန်တော်လည်း ကိုယ်ဘာသာကိုယ် ဆောင်မယ်" လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော် ကြားထဲက ယူကြုံးမရ ဖြစ်ရတယ်ဗျာ။ စဉ်းစားကြည့် လင်ရယ် မယားရယ် ဖြစ်လာရင် တတ်နိုင်သမျှ သက်သာအောင် ပိုက်ဆံကို လည်း ချွေတာ စုဆောင်းရတယ် မဟုတ်လား။ အခုတော့ဗျာ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ သံဝန်ထမ်းကိုယ်တိုင် လက်လျော့သွားပြီး... " ဒါဆို မင်းတို့ တရားမ၀င်လက်ထပ်တာနေမှာ အကောင်းပြောလို့ အကောင်းမှန်းမသိတာ ငါတော့ မင်းတို့ လက်ထပ်တယ်ပြောတာ လာညာနေတာပေါ့ " လို့ ပြောလိုက်တယ်ဗျာ။ ကိုယ်တော်လေးက အဲဒီစကားကိုလည်း နာ ရမှန်းမသိဘူးဗျာ။ လင်မယား ၂ ယောက်လုံး အက်စ်ပါတ် ကိုင်ထားကြတာနော်။
ပါတ်စ်ပို့ စာအုပ် အသစ်လုပ်ခြင်း
ခရီးထွက်တာ များတဲ့ သူတွေ အဖို့က ပါတ်စ်ပို့ မှာပါတဲ့ စာမျက်နှာတွေ ကုန်ဖို့ တော်တော်မြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပါစ်ပို့ စာအုပ် အသစ်ကို ဘယ်လို လုပ်ရသလဲဆိုတာ ပြောကြရအောင်ပေါ့။
ပါတ်စ်ပို့ စာအုပ် အသစ်ဆိုတာ ဒီနိုင်ငံရောက်မှ လျှောက်တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ လက်ရှိရှိပြီးသား စာအုပ်က စာရွက်တွေ ပြည့်သွားလို့ နောက်ထပ် အသစ် လုပ်တာပါ။ ဒါကြောင့် စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးမှာ ၂ မျက်နှာ လောက်သာ ကျန်မှ လုပ်ပါလို့ အကြံပေးပါရစေ။
စာအုပ်ကြီးအတိုင်းပြောရရင်တော့ (၁) ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် ၂ စုံ၊ (၂) ဓါတ်ပုံ ၂ ပုံ (၃) ပါတ်စ်ပို့ စာအုပ်အသစ် ထုတ်ပေးရန် လျှောက်လွှာ (၄) အခွန်ဆောင်ပြီးကြောင်း မိတ္တူ (၅) လက်ရှိစာအုပ်ရဲ့ စာမျက်နှာများ မိတ္တူ (၆) ငွေ စင်္ကာပူ ၆၀၀ (ယခင်တုန်းကပါ။ အပြောင်းအလဲ ရှိမယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး ပြောင်းသွားရင် ထောက်ပြပါဗျာ) အသိတစ်ယောက်က လာပြောပြတယ်။ စာအုပ်အသစ်က ၃၀၀၊ သက်တမ်းတိုးတာက ၃၀၀ပေါ့။
အဲဒီလို စာအုပ် အသစ် လုပ်မယ်ဆိုရင် ကြိုတင်ပြီးတော့ သွားစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်တုန်းက အချိန်နည်းနည်း ကြာပါတယ်။ အပေါ်က ပြောတဲ့အတိုင်း စာရွက် စာတမ်းတွေ (၁) မှ (၅) အထိ ကို ပေးလိုက်ရင် သံရုံးက လက်ခံထားပါတယ်။ နောက်တပါတ် သောကြာနေ့မှာ ဖုန်းဆက်ပြီး စာနံပါတ် လှမ်းတောင်းရပါတယ်။ အဲဒီစာနံပါတ်ကို မှတ်ထားပါ။ ရက်စွဲကိုလည်း မှတ်ထားရပါတယ်။
နောက်ထပ် ၂ လခန့်ကြာမှ သံရုံးကို ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီး စာအမှတ်နဲ့ စာအုပ်အသစ်လုပ်ထားတာ ရပြီလားလို့ မေးရပါတယ်။
သံဝန်ထမ်းကနေ ရပြီ ဆိုမှ ပိုက်ဆံ နဲ့ သွားထုတ်ရတာပါ။ အခုတော့ ဘယ်လို စနစ်နဲ့ ကျင့်သုံးနေပြီလဲဆိုတာ တော့ ကျွန်တော်လည်း မသိတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်သိတဲ့ စနစ်က အထက်က ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
စာအုပ်အသစ်လေး ရလာပြီ ဆိုရင်တော့ သိပ်ပြီး ၀မ်းသာစွာ ချက်ခြင်းပြန်မလာပါနဲ့ဦး။ မိမိ နာမည် စာလုံးပေါင်းက ယခင် အဟောင်းအတိုင်း စာလုံးပေါင်းတာလား၊ အချက်အလက် တွေ မှန်ကန်လားဆိုတာ သေချာစွာ စစ်ဆေးပါ။ အရေးကြီးဆုံးက " ဤပါတ်စ်ပို့ နံ့ပါတ် အသစ် ၉၉၉၉၉၉ သည် ယခင် ပါတ်စပို့ နံ့ပါတ် ၀၀၀၀၀၇ ၏အဆက်ဖြစ်ပါသည်" လို့ ရေးထားတဲ့ Observation stamp ပါမပါ သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ မပါရင်တော့ ပြန်ရေးခိုင်းဗျ။ အရင်ပါစ်ပို့ နံပါတ်နဲ့ အသစ်နဲ့က နံပါတ်ခြင်းမှမတူတာ။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆက်ဆံရင် အဲဒီစာတန်းက အရေးကြီးတယ်လေ။
မြန်မာလူမျိူးကလေး မွေးခြင်း နှင့် Certificate of Identity
စင်္ကာပူမှာ နေထိုင်တာ ကြာလာရင် ဒီနိုင်ငံမှာပဲ ကလေး မွေးဖွားခြင်းဆိုတာ မလွဲမသွေ တွေ့ရမှာပါပဲ။ အဲဒီလို ကလေး မွေးလာရင် CI (Certificate of Identity ) မလျှောက်ခင် အရင်ဆုံး လုပ်ရမှာက မောင်ဘယ်သူ (ပါတ်စပို့ အမှတ် ၉၉၉၉၉၉) နှင့် မဘယ်သူ (ပါတ်စပို့ အမှတ် ၈၈၈၈၈၈ ) တို့သည် စကာင်္ပူနိုင်ငံတွင် နေထိုင်စဉ်အတွင်း သား/သမီး ဖြစ်သူ မောင်ဘယ်သူ/မဘယ်သူ ကို မွေးဖွားသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံစာ အရင်ယူရပါတယ်။ အဲဒီထောက်ခံစာ က မြန်မာလို ရေးထားတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ အဲဒီစာကိုပဲ အသုံးပြုရတာပါ။
စာရွက်စာတမ်းက တော့ (၁) ဆေးရုံက မွေးစာရင်းနဲ့ (၂) ဖခင်၊ မိခင် ပါတ်စ်ပို့ မိတ္တူ တို့ ကို ယူသွားရင် အဲဒီစာရွက်ကလေး ကို စင်္ကာပူ ၈ ဒေါ်လာ ပေးရင်ရပါတယ်။
Certificate of Identity (CI)
ကျွန်တော် လျှောက်ခဲ့စဉ်တုန်းက ဆိုရင်တော့ (၁) စီအိုင် အသစ်ထုတ်ပေးပါရန် လျှောက်လွှာ (၂) ဖခင် ဖြစ်သူ၏ ရောက်ရှိဆဲလအထိ အခွန်ဆောင်ပြီးကြောင်း ထောက်ခံစာ (၃) ဓါတ်ပုံ ၂ ပုံ (၄) ကလေး ၏ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် (၅) အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့ မွေးဖွားကြောင်းထောက်ခံစာ မိတ္တူ တို့ ကို ပေးရပါတယ်။ အဲဒီလို တင်ထားပြီး နောက်ထပ် ၂လ လောက်ကြာမှ (လူကြီးပါစ်ပို့ အသစ် လျှောက်သကဲ့သို့) သံရုံးကို လာရောက် ကာ စင်္ကာပူငွေ ၁၅၀ နှင့် သွားရောက်ယူရပါတယ်။ (ဘလော့ဂါမှ ဖြည့်စွက်ချက် ။ မနံ့သာ (Juneone) ရဲ့ ကွန့်မန့်အရ CI လုပ်၇င် ယခု စင်္ကာပူငွေ ၃၀၀ ဖြစ်သွားပါပြီတဲ့။)
ကလေး စီအိုင်က စာရွက်အလွန်အင်မတန် နည်းပါးပါတယ်။ ဗီဇာ ရိုက်ဖို စာမျက်နှာ (၇) မျက်နှာပဲ ပါတဲ့အတွက် အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုဖို့တော့ လိုပါတယ်နော်။ စီအိုင်သက်တမ်းတိုးချင်ရင်တော့ ၃ နှစ်အတွက် ကို ၁၅၀ ပေးရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲလက ကျွန်တော်ရဲ့ ကလေးအတွက် သက်တမ်းသွားတိုးတာ စီအိုင်စာမျက်နှာလဲ ကုန်နေတော့ အသစ်ထုတ်ပေးဖို့ပါ တပါတည်း လျှောက်လိုက်ပါတယ်။ စီအိုင် အသစ်အတွက် ၁၅၀ ဒေါ်လာနဲ့ သက်တမ်းတိုးတာ ၁၅၀ ဒေါ်လာ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၃၀၀ ပေးလိုက်ရပါတယ်။ (ယခု၄၅၀ပေါ့)
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်ခန့် က ကျွန်တော် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်၊ ကျောင်းတက်စဉ်ကာလက ထိုင်းနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးတွင် သတ်မှတ်ထားသော အခွန်နှုန်းထားအတိုင်း အခွန်ပေးလာခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်တွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်မည်ဟု စဉ်းစားပြီးသောအခါ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကြိုတင်အခွန်အဖြစ် ရောက်ရှိနေသောနှစ်ထက် တနှစ်ပိုကာ အခွန်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
စင်္ကာပူသို့ ရောက်သောအခါ ကျွန်တော် အလုပ်ဆက်လုပ်နေပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်၏ ပါတ်စ်ပို့ ကို သက်တမ်းတိုးရန် လိုလာသောအခါ စင်္ကာပူသံရုံးသို သွားခဲ့ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆောင်ရသော ငွေမှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင်ဆောင်ရမည့်ငွေထက် နည်းသောကြောင့် လိုအပ်သော ငွေကို ထပ်ပေးခဲ့ရပါသည်။ နားမရှုပ်အောင် ကျွန်တော် ပြောပြပါမယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၁၉၉၅ဇန်န၀ါရီလ မှ ၁၉၉၆ နှစ်ဒီဇင်ဘာလ အထိ အခွန် တနှစ်စာဆောင်ခဲ့သည် ဆိုပါစို့။
ထိုင်းနိုင်ငံ တွင် ဆောင်ရမည် အခွန်ငွေ = ထိုင်းဘတ် ၄၀၀ =စင်္ကာပူငွေ ဒေါ်လာ ၂၀ ခန့် (ထိုစဉ်က ငွေလွဲနှုန်း )
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် WP ဖြင့် အလုပ်စတင်လုပ်ချိန် ၁၉၉၅ မတ်လ
စင်္ကာပူတွင် WP အနည်းဆုံး ဆောင်ရမည့် အခွန်ငွေ = စင်္ကာပူငွေ ဒေါ်လာ ၄၀
ထိုကြောင့် မတ်လ မှ ဒီဇင်ဘာလ အထိ ကွာခြားသော ငွေ ဒေါ်လာ ၂၀ _ ၉ လ = ၁၈၀ ဒေါ်လာ ကို ထပ်ပေးလိုက်ရပါသည်။
အပေါ်က ပြောထားတာ က နည်းတဲ့ နေရာ ကနေ များတဲ့နေရာ ကို ကြိုဆောင်မိရင် ထပ်ပြီး ဖြည့်ခိုင်းတတ်တဲ့ သဘောရှိတယ်ပေါ့။
ကဲနောက်တမျိုးတကယ်လို့ စင်္ကာပူမှာ ပုံမှန်ဆောင်ဘူးပြီးသွားပြီ။ တခြားနိုင်ငံကို အလုပ်ကိစ္စကြောင့် ၃ လ မှ ၆ လ လောက်အထိ သွားရတယ်။ သံရုံးက လည်း ကိုယ်သွားတဲ့နေရာမှာ နီးနီး နားနားမှာရှိတယ်ဆိုရင် တော့ ဆောင်ချင်ဆောင်လိုက်ပါ။ သိပ်ပြီး ဝေးနေမယ် ကိုယ်နေရတာ ကလည်း လပိုင်းဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် အကြံပေးလိုတာ က အဲဒီအတွက် အချိန်ကုန်ခံမနေစေချင်ဘူး။ စင်္ကာပူဆိုတာက ကျွန်းနိုင်ငံလေး။ သံရုံးဆိုတာ အလွန်ဆုံး နာရီဝက်အတွင်းရောက်တာလေ။ တခြားနိုင်ငံတွေ က သံရုံးက လည်း နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိတာမဟုတ်တဲ့အတွက် စင်္ကာပူ ပြန်လာမှ ဆောင်တာ ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
တကယ်လိုများ ၁နှစ်နဲ့ အထက် ကြာမယ်။ အဲဒီနိုင်ငံက အခွန်ဆောင်နှုန်းထားက စင်္ကာပူ မြန်မာသံရုံးမှာ ပေးရတာထက် သက်သာရင်တော့ ပေးခဲ့လိုက်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံကို ၄-၅လ လောက်ပြန်သွားသူများ အခွန်ဆောင်ခြင်း
နောက်ထပ် ထပ်မေးတဲ့ မေးခွန်းကတော့ ပီအာ မြန်မာနိုင်ငံသားက အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မြန်မာပြည်ကို ၄-၅ လ ပြန်သွားရတယ်ဆိုရင်၊ စင်္ကာပူ ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်ပြန်တဲ့ ကာလ ကို အခွန်မဆောင်ဖို့ ပြောဆိုမယ်ဆိုရင် တော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ ကို သံဝန်ထမ်းကို နားလည် လက်ခံလာအောင် ပြောဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ တချို့ကလည်း အဲဒီလို ပြောရမှာ ၀န်လေးတဲ့အတွက် ပြောမနေတော့ပဲ အခွန်ဆောင်လိုက်ကြပါတယ်။
(က) လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လခန့်က မြန်မာပြည်ကို ပြန်သွားရကြောင်း၊ အဲဒီလိုပြန်သွားရကြောင်းကို မြန်မာပြည်ကို ပြန်သည့်နေ့စွဲပါ ပါစ်ပို့ ထဲမှာ မြန်မာပြည်အ၀င်တုန်း အထွက်တုန်း များကို သေချာစွာ ပြပြီး ပြောဆိုရနိုင်ပါသည်။
(ခ) ထိုကဲ့သို့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်သွားပြီး ယခုအခါ စင်္ကာပူကို ပြန်လာကာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ စင်္ကာပူမှာ လုပ်သော အလုပ်ခန့်စာ များကို အသစ် (ပထမ အကြိမ် ) ဆောင်သကဲသို့ အစအဆုံး ပြန်ပြ နိုင်လျင် လက်ရှိ ပြန်လည်ရောက်လာသော နေ့မှ စ၍ အခွန်ပြန်လည် ပေးဆောင်နိုင်ပါသည် ခင်ဗျာ။
အခုဆိုရင် မြန်မာသံရုံးမှာ အခွန်နှင့်သော်လည်းကောင်း မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် လိုအပ်တဲ့ ကောင်စစ်ဝန်ဆိုင်ရာ ထောက်ခံမှု များအတွက် အချက်အလက် တချို့ ကို ကျွန်တော် မှတ်မိ ဉာဏ်မီသလောက် ရေးပြခဲပြီးပါပြီ။ အကယ်၍များ ဒီထက် ပိုသိလိုသည်များ ရှိသေးလျင်သော်လည်းကောင်း ကျွန်တော် ကျန်ရှိနေသေးသော အချက်အလက်များရှိနေသေးရင် ထောက်ပြ ဆွေးနွေး နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မြန်မာသံရုံးမှာ အခွန်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပါတ်သက်လို့ ကျွန်တော် ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါတယ်။
Posted by T T Sweet at 11:06 AM 8 comments: Links to this post
စင်္ကာပူ မြန်မာသံရုံးလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ပါတ်သက်ပြီး မေးချင်နေသူများအတွက် (၂)
မြန်မာအခွန် ပထမအကြိမ် ဆောင်ခြင်း
မြန်မာသံရုံးမှာ အခွန်ဆောင်တော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ဆောင်ကြရမလဲဆိုတာ အရင်ဆုံး နားလည်အောင် လုပ်ရတာပေါ့။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးက လူ့သဘာဝအတိုင်း ကိုယ်အိပ်ထဲက ပိုက်ဆံကို ဘာမှအကျိုးအမြတ်မရှိပဲ မည်သူကမှ ထုတ်မပေးချင်ကြပါဘူး။ စင်္ကာပူနိုင်ငံ နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ အခွန်နှစ်ထပ်မပေးဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ နိုင်ငံ ၂ ခု သဘောတူ စာချုပ် ချုပ်ဆိုထားကြတာပါ။ အင်္ဂလန် နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလဲ အဲဒီလို လက်မှတ်ထိုးထား ကြတာပါပဲ။ သို့ပါသော်လည်း ကျွန်တော်တို့ စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ အခွန်ကို ပေးဆောင်နေသလို မြန်မာသံရုံးတွင်လည်း အခွန်ပေးနေရပါသည်ပေါ့။ စင်္ကာပူနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံသဘောတူ လက်မှတ်ထိုးတာတဲ့ စာချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ Legalize မလုပ်ရသေးလို့ မြန်မာနိုင်ငံဖက်အနေနဲ့
တရားမ၀င် သေးဘူးလို့လဲ ပြောကြတယ်။ ‘ဒါပေမဲ့လည်း ကျွန်တော် ပြောထားတဲ့အတိုင်း နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှာ မဟုတ်လို့ ဒီအကြောင်းကို မေ့ထားလိုက်ရအောင်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်ကအထိ မြန်မာသံရုံးမှာ အခွန်ပေးတော့မယ်ဆိုရင် ပီအာ အီးပီ ဖြစ်ပါက ဒေါ်လာ ၁၅၀၊ အက်စ်ပါတ် ဖြစ်ပါက ဒေါ်လာ ၈၀ ဒဗလျူပီ (WP) ဆိုပါက ဒေါ်လာ ၄၀ နှင့် အိမ်ဖော်ဖြစ်ပါက ဒေါ်လာ ၃၀ ဆိုပြီး ပေးဆောင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ မြန်မာတော်တော်များများက မိမိ တို့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ပီအာ အီးပီများသည် ဒေါ်လာ ၈၀ မှ ၁၂၀ ခန့် အတွင်းပေးဆောင်ကြ၍ အက်စ်ပါတ် များမှ ဒေါ်လာ ၆၀ မှ ၉၀ အတွင်း ဒဗလျူပီ (WP)ကတော့ ဒေါ်လာ ၄၀ ဆောင်နေကြပါသည်။
ပထမဆုံး အကြိမ် အခွန်ဆောင် ပါက (၁) မိမိ ပါစ်ပို့ မိတ္တူ၊ (၂) ဓါတ်ပုံ ၂ ပုံ (၃) မိမိအလုပ်မှ အလုပ်ခန့်ကြောင်း အလုပ်ခန့်စာ (မိမိ တို့ လည်ပါတ်သလို မူရင်းလစာ အား တစ်လ ဒေါ်လာ ၈၀၀ မှ ၁၂၀၀ ခန့် ရကြောင်း စာပါလျင်ဖြစ်ပါသည်။) (၄) မိမိ၏ နေထိုင်ခွင့် ပါမစ် မိတ္တူ ( အက်စ်ပါတ်၊ အီးပီ။ ပီအာ) ၊ (၅) ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် (မိတ္တူ ရှိပါက ကြိုတင်ဖြည့်သွားပါ။ ပါစ်ပို့ လျှောက်ရာတွင် ဖြည့်စွက် ရသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ) မိတ္တူမရှိပါလျင် ရောက်ရောက်ခြင်း ကောင်တာ တွင် ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ဖောင် ၂ စုံကို တောင်းကာ ဖြည်စွက်ပါ။ တစ်စုံတည်းသာ ပေးလျင် ဖြည့်စွက်ပြီး မိတ္တူသွားကူးထားပါ။ (၆) အခွန်ဆောင်ခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်လွှာ
( ထိုလျှောက်လွာကို သံရုံးအခန်းထဲတွင် လွပ်လပ်စွာ ယူဆောင်နိုင်ပါသည်။ သံရုံးခန်းထဲ ၀င်သည်နှင့် မျက်စိဖွင့် နားဖွင့်ကာ လိုက်လံ လေ့လာပါ။ ကြောက်ရွံ့ရွံ့ မလုပ်ကြပါနှင့်)။
အထက်ပါ အချက် ၅ ချက်စလုံး အပြည့်အစုံ ပါသွားလျင် ကောင်တာ မှ ခေါ်ပါက မိမိ ယူဆောင်လာသော စာရွက်စာတမ်းများ ကို ပြကာ အခွန်ဆောင်လိုကြောင်း၊ မိမိ ရောက်နေသော သို့မဟုတ် မိမိ စတင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သောလမှ မိမိဆောင်လိုသော လအထိ ဘယ်နှစ်လ ဆောင်ချင်ပါကြောင်း ပြောပါ။ အကယ်၍ မိမိရသော လခ မှာ မှန်ကန် ပါရဲ့လား မေးပါက မျက်တောင်တချက် မခတ်ပဲ မှန်ကန် ပါကြောင်း တွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိပဲ ရဲတင်းစွာပြောဆိုပါလေ။ ထိုအခါ သံဝန်ထမ်း (ယခုလက်ရှိ ၀၀ တုတ်တုတ် အန်တီကြီးမှ ) မည်မျှ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း မည်သည်စာရွက် လိုအပ်သေးကြောင်းပြောပါလိမ်မည် (မလိုအပ်ပါက မပြောပါ)။ ပြီးလျင် ဆက်လက်ပြီး ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ခေါ်မည် အလှည့် ထပ်စောင့်ပါလေ။
နောက်ထပ် ၁နာရီခွဲမှ ၂ နာရီအတွင်း သံဝန်ထမ်း (ယခုလက်ရှိ အသားညိုညို မျက်မှန် ဆံပင်ဘေးခွဲ အမျိုးသား ) မှ မိမိနာမည် ခေါ်ပါလျင် ပထမ သံဝန်ထမ်းပြောထားသော ငွေပမာဏ ကို ကိုင်၍ ဒုတိယ သံဝန်ထမ်း ( ပထမအတွင်းဝန်) ကို ပိုက်ဆံပေးကာ သူပေးအပ်သော စာရွက် ကို ပြန်ယူလိုက်ပါ။
ထိုသို့ ဆိုလျင် အခွန်ဆောင်ပြီးသွားပြီ ဖြစ်ပါသည်။ မိမိ နာမည်၊ ပါတစ်ပို့စ် နံပါတ် တို့ ကို သေချာစွာ စစ်ပါ။ တခါတရံ မှားယွင်းစွာ ရေးတတ်ပါသည်။
မြန်မာသံရုံးနားတွင် မိတ္တူကူးခြင်း လုပ်ရန် အလွန်အင်မတန် ခက်ခဲပါသည်။ သံရုံးထဲတွင် မိတ္တူကူးစက် ရှိပါသည်။ စာမျက်နှာ တရွက် ကို ပြား ၂၀ ပေးရပါသည်။ သို့သော် ထိုမိတ္တူကူးစက်မှာ အချိန်နှင့် အမျှ ပျက်နေတတ်ပါသည်။ (ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ထိုမိတ္တူကူးစက်တွင် တစ်ဒေါ်လာ မက ဆုံးသွားဘူးပါသည်။မိတ္တူကူးလိုလျင် အနီးဆုံးမှာ Tanglin Mall တွင် ၂ ထပ်၌ ပါတီ လုပ်ရန် ပစ္စည်းများရောင်းသောဆိုင် တစ်ခု တွင်သာ မိတ္တူကူးစက်ရှိပါသည်။ တခါတရံ မိတ္တူကူးဆိုင်မှာ လည်း ပိတ်ထားတတ်ပါသည်။ ထိုအခါ အနီးဆုံးမှာ Orchard MRT Station အထိ သွားရောက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာအခွန် ဒုတိယအကြိမ်ဆောင်ခြင်း နှင့် အထက်
သိတဲ့အတိုင်း ဘယ်အရာမဆို ပထမအကြိမ် လုပ်ခြင်းကို အဆင်ပြေချောမွေ့ အမှားကင်းအောင် လုပ်ဖို့သာ ခက်တာ၊ ဒုတိယအကြိမ် တတိယအကြိမ်ဆိုရင် လွယ်သွားတာပေါ့။ ပထမအကြိမ်လောက် မခက်တော့ပါဘူး။ အလွန်အင်မတန် လွယ်တယ်လို့ပြောရမှာပါ။ တစ်ခုပဲ ကိုယ်အလှည့်ရောက်ဖို့ စောင့်ဆိုင်းရတာ အလွန်အင်မတန်ကြာတာ တစ်ခုပါပဲ။ အာလူးပေးတာ ခဏရပ်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုတာလေး ဆက်ကြရအောင်။
ဒုတိယအကြိမ် သွားဆောင်တဲ့ သူတွေ က ပထမအကြိမ်တုန်းကလို စာရွက်စာတမ်းတွေ အများကြီး ပြင်ဆင်စရာမလိုပါဘူး။ (၁) ပါတ်စပို့ စာရွက် (မိမိ ဓါတ်ပုံ ပါသော စာမျက်နှာ၊ ပါတ်စပို့စ် သက်တမ်းပါသော စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ ကိုသာ ကူးရန်) (၂) ပထမအကြိမ် တုန်းက အခွန်ဆောင်ပြီးကြောင်း သံရုံးမှ ထုတ်ပေးသော ထောက်ခံစာ မိတ္တူ (၃) အခွန်ဆောင်ခွင့် ပြုပါရန် လျှောက်လွှာ အဲဒီ ၃ ခုသာ ပြနိုင်ရင် ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကြ သွားဖို့တောင်မလိုပဲ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ နဲ့လမ်းကြုံရင် တောင် ထည့်ပေးလိုက်လို့ ရပါတယ်။
ကျွန်တော် တို့ လွန်ခဲတဲ့ ၁၂ နှစ်ခန့်က မြန်မာသံရုံးမှာအခွန်ဆောင်ဖို့ တော်တော်ခက်ခဲကြောင်း သူငယ်ချင်းတွေ ပြောပြတယ်။ တရက်မှ လူ အယောက် ၂၀ ပဲ အခွန်ဆောင်တာ ခွင့်ပြုခဲ့တာတဲ့လေ။ အခွန်ဆောင်မဲ့နေ ဆိုရင် မနက် ၄ နာရီလောက် သံရုံးရှေ့မှာ မိုးရွာရွာ နေပူပူ တန်းစီရတာလို့ ပြောကြတယ်။ နောက်မှ စလုံးတွေက ကွန်ပလိမ်းတက်လို့ အဲဒီလိုတန်းစီတာ ကို ခွင့်မပြုတော့တာတဲ့။ သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်ပြောတာ ကြားဖူးတာပါ။
သိတဲ့အတိုင်း မြန်မာပြည်က ထွက်လာရင် အလုပ်ဆိုပြီး ထွက်လာရင်တော့ ပါတ်စပို့သက်တမ်းက ၃နှစ် ရပြီး၊ အလည်ဆိုပြီးထွက်လာရင် တနှစ်ထဲ ရတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ပါတ်စ်ပို့သက်တမ်းတိုးတာ ကလည်း မှတ်သားထားရမှာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေကလည်း ရတဲ့ ခွင့်တရက်အတွင်းမှာ လုပ်စရာ အကုန်ပြီးအောင်လုပ်ကြတော့ အခွန်ဆောင်တာရယ် သက်တမ်းတိုးတာရယ် ကို တွဲပြီး လုပ်ကြပါတယ်။
အခွန်ဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ စာအုပ်ကြိးအတိုင်းပြောရရင် (၁) ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်၊ (၂) ပါတ်စပို့မိတ္တူ၊ (၃) လက်ရှိ ကာလ အထိ အခွန်ဆောင်ပြီးကြောင်း ထောက်ခံချက် (၄) ပါတ်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးခွင့် လျှောက်လွှာ။ တွေကို ပြပြီး ရင် သက်တမ်းတိုးတာ လျှောက်ထားလို့ရပါမယ်။ အထက်မှာ ပြောတဲအတိုင်း ဘယ်သူမှ သီးသန့်မလုပ်ကြတော့ပဲ အခွန်ဆောင်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော်၊ ကျွန်မ ပါတ်စပို့ ကိုပါ သက်တမ်းတိုးခွင့် ပါ ပြုလုပ်ပေးပါလို့ သံဝန်ထမ်းကို ပြောလိုက်တာ နဲ့ သက်တမ်းတိုးလို့ ရပါတယ်။ သက်တမ်းတိုးတာ က တော့ ပါတ်စပို့ တစ်ခု စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ ၃၀၀ ပါ။
အရင်တုန်းကတော့ သက်တမ်းတိုးရင် ကိုယ့်စာအုပ်ကုန်မဲ့ နေ့ကနေ စပြီး နောက်ထပ် ၃ နှစ် တိုးပေးပါတယ်။ ဥပမာ မောင်အေ ရဲ့ စာအုပ်က ဇန်န၀ါရီ ၂၀၀၉ မှာ ကုန်မယ်ဆိုပါဆို့။ သူက ပါတ်စပို့ သက်တမ်းသွားတိုးတာ နိုဝင်ဘာ ၂ရက် ၂၀၀၈ ဆိုပေမဲ့လဲ သူရဲ စာအုပ် သက်တမ်းက ၃ နှစ်တိုးရင် ဇန်န၀ါရီလ ၂၀၁၂ မှ ကုန်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ပြောင်း မူတစ်ခု ပြောင်းဆိုသလို အခုတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အခု သွားတိုးရင် သွားတိုးတဲ့နေရက်က စပြီး နောက်ထပ် ၃ နှစ် တိုးပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိုလို့ အရေးတကြီး ခရီးထွက်စရာ မရှိရင် မိမိတို့ပါတ်စပို့ ကုန်ခါနိးမှ သွားတိုးကြပါနော်။ ဟိုတလောက အသိတစ်ယောက်သွားတိုးတာ အခုသက်တမ်းတိုးတဲ့အခါ အခွန်ကို အကြေဆောင်ရင် ကုန်မဲ့နေကနေ စပြီး တိုးပေးပြန်သတဲ့။ ပြောင်းသွားပြန်ပြီလေ။
Posted by T T Sweet at 7:40 PM 1 comment: Links to this post
စင်္ကာပူ မြန်မာသံရုံးလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ပါတ်သက်ပြီး မေးချင်နေသူများအတွက် (၁)
မြန်မာသံရုံးမှာ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီးမေးချင်နေသူများအတွက် အခွန်ဆောင် ကြမယ်။ ပါတ်စပို့ သက်တမ်းတိုးကြမယ်။ ပါတ်စ်ပို့ စာအုပ် အသစ်လုပ်ကြမယ် အစရှိသဖြင့် ....
မြန်မာကျူးပစ်ဖိုရမ်ထဲတွင် မြန်မာသံရုံး အခွန်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပါတ်သက်လို့ မေးခွန်းတွေ မေးကြတယ်လေ။ အခုအချိန်ထိလည်း မေးခွန်းတွေကတော့ ဆက်တိုက်ကိုပဲ မေးလာကြတုံးပါပဲ။ သံရုံးမှာ ဘယ်လိုအခွန်ဆောင်ရသလဲဆိုတာကတော့ သိပ်ပြီး အပြောင်းအလဲမရှိလှပေမဲ့ တချို့သောကိစ္စလေးတွေမှာ သိပ်အရေးမကြီးဘူးလို့ ထင်ရပေမဲ့လဲ အဲဒီအချက်အလက်တွေက သံရုံးမှာမလိုအပ်ပဲ အချိန်တွေကုန် ခွင့်တွေကုန်ဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေ ကြုံရကြောင်း ပြောလာရတဲ့သူတွေများလာလို့ စာတတန်ပေတဖွဲ့ ပြန်လည် ဆန်းသစ်လိုက်ရတာပါလို့ ပြောရမှာပါပဲ။
အခုဆက်လက်ရေးသားသော အကြောင်းအရာ သတင်းအချက်အလက်များသည် ကျွန်တော်တို့ တွေ့ကြုံခဲ့ရသော အခြေအနေများကို ပြန်လည်တင်ပြခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ထိုအတိုင်း တသတ်မှတ်တည်း ဖြစ်မည်ဟု တရားသေ မပြောလိုပါ။ တခါတလေ အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲ နိုင်ပါသည်။ ထိုအပြင် သံရုံးတွင် ပထမအတွင်းဝန် ပြောင်းလဲပါကလည်း ထိုသူ၏ သီးသန့် မူပြောင်းလဲ မှုများကြောင့် အနည်းငယ် မတူညီနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ယခုတင်ပြ ပြောဆိုမည်မှာ ၂၀၀၈-၉ ခုနှစ်အတွင်း ယာယီမှန်ကန်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် ရေးသားထားသည်များမှာ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးရန် အလိုငှာရေးသားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ ဗဟုသုတ အနေဖြင့်သာ ရေးသားပါမည်။ ထိုအပြင် ကျောင်းသားများအတွက်ကောင်စစ်ဝန် လုပ်ငန်းများကို အတွေ့အကြုံ နည်းပါသောကြောင့် ထည့်သွင်းမရေးသားနိုင်သည်ကို ခွင့်လွတ်စေလိုပါသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သော ၂၀၀၀ ခုနှစ်ခန့်က အခွန်ထမ်း၊ ကျောင်းသား၊ မှီခို၊ မိဘ အဖြစ်လာရောက်နေထိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံသား အရေအတွက် မှာ ၃သောင်း ခန့်သာ ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းနေရာမှ စင်္ကာပူ၏ လူဦးရေးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု တို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ဦးရေ တိုးတက်လာသည်မှာ ယခုနှစ် ၂၀၀၈ တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား ဦးရေ ၇သောင်းမှ တစ်သိန်း အထိ သိသိသာသာ တိုးလာသည်ဟု ခန့်မှန်းပြောဆိုလာကြသည်။ (စာကြွင်း- ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လူစည်စည် ပေ ၁၀၀ ခန့် လမ်းလျှောက်လိုက်လျင်ပင် မြန်မာလူမျိုး ၅ ဦးခန့် ကို အလွယ်တကူတွေ့နိုင်ပါသည်။)
ထိုသို့ တိုးတက်လာသော မြန်မာလူဦးရေ ကို ပါတ်စ်ပို့ လုပ်ငန်းနှင့် ပါတ်သက်သော လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာသံရုံးတွင်ရှိသော
၀န်ထမ်းလူဦးရေ မှာ ပိုပြီးတိုးလာခြင်း မရှိသောကြောင့် ယခင်က ထိုသို့ ကောင်စစ်ဝန်လုပ်ငန်းများကို နေ့တ၀က် ခန့်ကြာသော
၀န်ဆောင်မှူများမှာ တစ်နေကုန် မပြီးစီးနိူင်ကာ နေ့စဉ် ၁၀၀ နှင့် အထက် မြန်မာလူမျိူးများအတွက် လုပ်ဆောင်နေရသည်။
ထိုကြောင့် မိမိ အလုပ်မှ ခွင့်တ၀က်ခန့် သာ ယူပြီး သွားရောက်မည် ဆိုပါက မိမိတို့လုပ်ဆောင်လိုသော ကိစ္စများပြီးစီးနိုင်မည် မဟုတ်ပါသဖြင့် တစ်နေကုန် ခွင့်ယူရန်လိုအပ်ပါကြောင်း ပထမဦးစွာ အသိပေးလိုပါသည်။ ထိုအပြင် မိမိသွားလိုသည့် နေ့ မတိုင်ခင် ည ၁၂ နာရီ ခန့်တွင် စာရွက်တရွက်ပေါ်မှာ ကိုယ်ရဲ့ နာမည်နဲ့ လိပ်စာဖြစ်ဖြစ် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ဖြစ်ရေးထားတာကို သံရုံးမှာ အခွန်ဆောင်သူများက မိမိတို့ကိုယ်တိုင် လုပ်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ (လွန်ခဲ့သော လများ- ၂၀၀၈ စက်တင်ဘာပါတ်ဝန်းကျင် က- ကိုးကား- ည ၁၂နာရီတွင် ထုတ်ပေးလေ့ရှိသော မြန်မာတစ်ယောက်၏ ပြန်လည် တင်ပြချက်။)
ထိုသို့ည ၁၂ နာရီတွင် ထိုစာရွက် မရှိပါက မနက် ၄ နာရီခန့်တွင် သေချာပေါက် ရှိလိမ့်မည် ဟု အကြံပေး ပြောကြားလိုပါသည်။ အဲဒီနောက် မနက် ၈ နာရီမှာ သံရုံးတခါးကို သံရုံးစောင့် (Security) က ဖွင့်လှစ်ပေးတဲ့ အခါမှာ လူအုပ်ထဲမှာ တစ်ယောက်က ည ၁၂နာရီတုန်းကနေ မနက် ၈ နာရီ မထိုးခင်အထိ ရေးထားတဲ့ နာမည်စာရင်းကို ကိုင်ဆောင်ပြီး အခွန်ဆောင်တဲ့ ကောင်တာရှေ့က သံရုံးရဲ့ တရားဝင် စာရွက်ထဲမှာ ပြန်လည်ကူးရေးရတာပေါ့။ အဲဒီမှာ စာရွက်ထဲကနေ သံရုံးစာရွက်ထဲကို ကူးရေးတဲ့နေရာမှာ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့လည်း လိုအပ်တာပေါ့လေ။ တခြားသူကို မယုံရင်တော့ ကိုယ်က အဲဒီစာရွက်ကို ယူပြီး အပင်ပန်းခံကာ နာမည်တွေအားလုံးကို ရေးပေးလိုက်ပေါ့။ ထိုကဲသို့ မိမိနာမည် ကို ဖြည့်သွင်းစဉ် အမှတ်စဉ် ကို သေချာစွာ မှတ်ထားပါလေ။ ထိုဂဏန်းမှာ ၂ လုံးထီ ထိုးဖို့မဟုတ်ဘူးနော်။ မိမိကို သံဝန်ထမ်းများမှ ခေါ်ဆိုမည် နံပါတ်ဖြစ်ပါသည်။
ပုံမှန် သံရုံးဖွင့်ချိန် သည် နံနက် ၉ နာရီမှ နေ့လည် ၁ နာရီ နှင့် နေ့လည် ၂ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ မိမိ နံပါတ်သည် နံ့ပါတ် ၁ မှ ၅၀ အတွင်း ဖြစ်ပါက နေ့လည် ၁ နာရီ မတိုင်ခင် ပြီးစီးရန် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း နံပါတ် ၅၀ မှ ၁၀၀ အတွင်း ဆိုပါက ညနေပိုင်းမှ သာ ခေါ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
နံနက် ၅ နာရီ လာရောက်သော်လည်း နံပါတ် ၅၀ နောက်ပိုင်းရောက်ပါက အိမ်သို့ ပြန်၍ အိပ်ပါလေ။ နေ့လည် ၂ နာရီ ခန့် အရောက်ပြန်လာနိုင်ပါက နောက်ထပ် ၄ နာရီခန့် ဆက်လက် ဒုက္ခခံနိုင်ရန် ကျင့်ထားပါ။ တခါတရံ လေအေးပေးစက် အလုပ်လုပ်၍ တခါတရံ အလုပ်မလုပ်ပါ။
နေလည် ၂ နာရီ ခန့်လာပါက ကောင်တာသို့ ချက်ခြင်းသွားရောက်ကာ နံပါတ် ဘယ်လောက်ခေါ်နေပြီလဲဆိုတာ ရဲရဲတင်းတင်း သွားရောက်မေးနိုင်ပါသည်။ ကြောက်စရာမလိုပါ။ ရဲတင်းပါ။ မကြောက်ပါနှင့်။ သို့သော် ရိုင်းစိုင်းသော စကားမသုံးမိစေပါနှင့်။ ထိုကဲသို့ မေးမြန်းရာ မိမိ နံပါတ် ကျော်သွားပါကလည်း ကျော်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်း မိမိနံပါတ်မှာ ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှ ဖြစ်ကြောင်း အကျိုးအကြောင်းပြောပြပါ။ သံဝန်ထမ်း (အခုလောလောဆယ် ၀၀ တုတ်တုတ် အန်တီကြီး ) က လုပ်ဆောင်ပေးပါလိမ်မည်။
(ဘလောဂါမှ ဖြည့်စွက်ချက်။ ။ လွန်ခဲ့သော တစ်ပတ်မှ အခွန်ဆောင်လာသူတစ်ဦးက ယခုညဘက်သွား တုံကင်ယူစရာမလိုတော့။ မနက်မှတစ်ခါထဲသွားလျင်လည်း နေ့ချင်းပြီး အခွန်ဆောင်လို့ ရနေပါပြီ ဟုပြောပါသည်။)
(မြန်မာကျူးပစ်ဖိုရမ်တွင် ဦးမောင်ခြိမ့်ရေးထားသည်ကို ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပါသည်။)
Posted by T T Sweet at 11:15 AM No comments: Links to this post
KFC က လိုလေး လုပ်စားချင်တာပါ။ အဲဒီနေ့က တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သမီးတို့ကျောင်းက assignment ပေးလိုက်တာ ခလေးတွေကို အသီးအနှံစားတတ်အောင် vegetable salad လုပ်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့ ဂျူဂျူနဲ့ အတူ ဈေးဝယ်။ Salad လုပ်ပြီး သူ့ကို အရင်ကျွေးရပါတယ်။ သမီးကတော့ အရွက်အစိမ်းတွေဆိုတော့ မကြိုက်ပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်လုပ်စားတာဆိုတော့ အတော်ပျော်ပါတယ်။ ဂျူဂျူ ကိစပြီးတော့မှ Chicken wrap အလှည့်ရောက်ပါတယ်။ KFC ကနဲ့သိပ်တော့ မတူပေမဲ့ စားလို့တော့ ကောင်းပါတယ်။ smoke နံ့လဲ မပါဘူးပေါ့လေ။
ပထမဆုံး ထည့်လိတ်ရမဲ့ အသီးအနှံတွေကို အတုံးအသေးလေးတွေ လှီးချွတ်ထားပါ။ ပြီးရင် အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံထဲက salad cream နဲ့ နယ်ထားပါ။
ကြက်သားကိုလဲ အတုံးလေးတွေတုံးပြီး ယိုးဒယားမယ်အကြော်မှုန့်၊ ငရုပ်ကောင်း၊ဆား၊ အချိုမှုန့် အစရှိသည်တို့ ထည့်ပြီး chicken ပေါက်ပေါက်လိုဖြစ်အောင် ကြော်ထားပါ။ chicken nuggets ရယ်ဒီမိတ်ကို အတုံးလေးတွေ လှီးထားတာလဲ ရောထည့်ပါ။
Chicken wrap လုပ်မဲ့ အရွက်ကိုစလုံးမှာဆိုရင် NTUC တွေ၊ စူပါမားကတ်တွေမှာ ၀ယ်လို့ရနိူင်ပါတယ်။အောက်က ပုံမှာကြည့်ပါ။
ပြီးရင် စင်းနီတုံးခပ်ကြီးကြီး သို့ လင်ပန်းပေါ် လိတ်မည့်အရွက်ကိုတင် အပေါ်မှာပြထားတဲ့ပုံထဲက cheese spread မယိုးနိစ် တို့နဲ့ သုတ်လိမ်းပါတယ်။
အပေါ်ကနေ အသီးအရွက်တွေ၊ Chicken ပေါက်ပေါက်တွေ ကို ထည့်ပြီး အသာလိတ်ပါတယ်။ မွှေးအောင် ငရုပ်ကောင်းမှုန့်လေးလဲ အပေါ်ကဖြူးပါတယ်။
အလယ်က ဓားနဲ့ ထက်ပိုင်းဖြတ်ပြီး အဲလိုလေးပွဲပြင်ပြီး စားလို့ရပါပြီရှင်။
Posted by T T Sweet at 9:54 AM5comments: Links to this post
Labels: (၇- ၃) Chicken Wrap, (၇) Western food (ခလေးတို့အကြိုက်)
ကြောင်များသည် ငါးကြော်ကြိုက်၏။ မဆွိတီသည်ကား KFC မှရောင်းသော cheesy BBQ Meltz ကို အလွန်ကြိုက်လေသည်။ တစ်ချို့ကလဲ အလွယ်တကူ Chicken wrap ဟုခေါ်ကြပါသည်။
အရင်က ကေအက်ဖ်စီဆိုလျင် ကြက်ကြော်သာစားလေ့ရှိပါသည်။ ဘာကိုမှ အထုးအဆန်းဆိုလျှင် စားလေ့စားထ၊လုပ်လေ့ လုပ်ထမရှိသော မဆွိတီကို သူ့အိမ်သားက မင်နူးအသစ် စားကြည့်ပါလားဆိုလျင် " စားမှမစားဘူးတာ ... ဘာမှန်းမသိတဲ့ဟာကြီး ... မစားချင်ပါဘူး" ဆိုကာ ခေါင်းသာတွင်တွင် ခါလေ့ရှိသည်။ တစ်ခါတွင် သူ့အိမ်သားက ထို Chicken wrap ကို မှာစားရင်းနဲ့ အငြိမ်မနေ။ အတင်းကို ပါးစပ်ထဲထိုးထဲ့လာလို့ စားကြည့်မိရာမှ ထိုChicken wrap အရသာနှင့်အတူ မီးခိုးနံ့သင်းသင်းလေးကိုပါ စိတ်ထဲကြိုက်နှစ်သက်မိလေတော့သည်။ အဲဒီအနံ့လေးက smoke လုပ်ထားလို့တဲ့။ ထို chicken wrap ကိုကြိုက်လွန်း၍တကြောင်း၊ လက်တည့်စမ်းချင်သည်ကတစ်ကြောင်း ထိုထဲတွင်ပါသောအရာများကို မှတ်ကာ အိမ်တွင် လုပ်စားကြည့်ပြန်သည်။ အရသာ တူနေသော်လည်း အနံ့ ... အနံ့ ကလိုနေသည်။ smoke နံ့။
smoke နံ့ ဆိုတော့ မိဆွိတီတို့ သတိရမိချေပြီ။ ငယ်ငယ်ကနေသော အိမ်ခြံဝန်းထဲတွင် အုန်းပင် များစိုက်ထားသည်။ နွေရာသီရောက်ပြီဆိုလျင်ဖြင့် အုန်းလက်ခြောက်များသည် အိမ်ခေါင်မိုးပေါ် တ၀ုန်းဝုန်းကျကာ ကြွေလေ့ရှိသည်။ အုန်းပင် ၁၀ပင်မှကျလာသော ထိုအုန်းလက်များကို သွားလွှင့်ပစ်ရန် ခက်ခဲသည်ကတစ်ကြောင်း၊ မီးသွေးရှားပါးချိန်တွင် အိမ်မီးဖိုချောင် အတွက် ထင်းရရှိစေရန်တစ်ကြောင်း အမေတို့က အုန်းလက်ကလေးများကို မီးသွေးတုံးအရွယ်၊ အတုံးလေးများ ဖြတ်ကာ အခြောက်လှန်းထားလေသည်။ နောက်တော့ မီးသွေးမီးဖိုထဲ မီးသွေးနှင့်အတူရောကာ ဟင်းချက်လေသည်။ အုန်းက အဆီပါ၍လားမသိ မီးကတောက်လိုက်သည့်ဖြစ်ချင်း။
မဆွိတီတက္က္ကသိုလ်တက်တော့ အဆောင်တွင်နေခွင့်ရသည်။ တစ်ခါတရံ စာမေးပွဲပြီးကာ အိမ်ပြန်ပြီဆို အမေတို့၊ အဖွားတို့ မီးသွေးဖိုထဲ ထင်းတွေထည့်ချက်ကာ မီးခိုးတလူလူနှင့် ဖြစ်နေတာကို အမြဲညူစူလေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဟင်းဝင်ချက်လို့ မျက်လုံးထဲ မီးခိုးဝင်ပြီဆို အမေတို့ လုပ်တာနဲ့ အမေ့သမီး ကျောင်းမပြီးခင် မျက်လုံးကန်းတော့မှာပဲ ဆိုကာ အဆောင်တွင် ခြေမွှေးမီးမလောင်၊ လက်မွှေးမီးမလောင် ကျော့ကျော့လေးနေတာ ကြာနေပြီဖြစ်သော တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကြီးက ကွန်ပလိမ့်တွေ တက်ချေတော့သည်။ ဤတွင် ကဲ ... ကဲ ညီး ဒီလောက်ဖြစ်နေရင်လဲ ငတို့ပဲ ချက်ပါ့မယ်အေ ဆိုကာ သူတို့ဟာသူတို့ ချက်ချေတော့လဲ ၀က်သားဟင်းလဲ ကျက်ချေပြီ။ ချဉ်ပေါင်ဟင်းလဲကျက်ချေပြီ။
ထမင်းစားဖို့စားပွဲပြင် စားမယ်ကြံတော့ ချဉ်ပေါင်ဟင်းကိုခပ်အမြည်း၊ ၀က်သားဟင်းကို အထည့် အမေတို့ ဟင်းကြီးက မီးခိုးစော်ကြီးနံလိုက်တာ။ သမီး မစားနိူင်ဘူးအမေ ဆိုကာ ကွန်ပလိမ့်တပ်မိလေသော မိဆွိတီတို့ ခုတော့ chicken wrap တောင် အဲဒီမီးခိုးနံ့ပါမှတဲ့ ဆိုတော့လဲ ... ။ ။
Posted by T T Sweet at 1:21 PM3comments: Links to this post
အသစ်စက်စက် နိူဘယ်လ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် သမတ အိုဘားမား
နိုင်ငံတကာသတင်းတပုဒ်ကို ဘာသာပြန်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေကို ကျွန်တော် ပြန်ပြောပါရစေ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတပတ်က သတင်းလောက တခုလုံးကို တုန်လှုပ်သွားစေတဲ့ သတင်းကတော့ အမေရိကန် နိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံး လူမည်း သမတအဖြစ်နဲ့ သမိုင်းဝင်ခဲ့တဲ့ သမတ အိုဘာမား (Barak Obama) က ဒီနှစ် ၂၀၀၉ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုကို ဆွတ်ခူးရှရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပါ။
နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို သမတအဖြစ်နဲ့ လုပ်ကိုင်နေရင်း အိုဘာမားအပါအ၀င် ၃ ယောက်သာ ရဘူးပါတယ်။ ၁၉၀၆ ခုနှစ်က သီအိုဒို ရုစဗဲလ် နဲ့ ၁၉၁၉ ၀ူဒရို ၀ိလ်ဆင် တို့ ၂ ယောက်သာ ရခဲ့ဘူးပါတယ်။ သမတ ဂျင်မီကာတာကတော့ သူအနားယူပြီးမှာ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ ရခဲ့တာပါ။
သမတ အိုဘာမားကို ဘာလို့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုကို ချီးမြှင့်ရလဲ ဆိုရင် အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးကို လှုပ်ကိုင်သွားနိုင်အောင် လုပ်မှုနဲ့ သူနိုင်ငံသားတွေကို ကောင်းမွန်တဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရနိုင်မဲ့ အနာဂါတ်လမ်းကို ပေးနိုင်မှု တို့ကြောင့်ပဲလို ဆိုပါတယ်။
တကယ်တော့ သမတ အိုဘားမားဟာ သူ သမတ ဖြစ်လာချိန်လေးအတွင်းမှာ ကမ္ဘာကြီးကို နူကလီယားစစ်လက်နက်တွေ မရှိတဲ့ ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ချင်လိုတဲ့ သူ့ရဲ့အမြင် သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေ၊ ၂၁ ရာစု ရဲ့ ခေတ်သစ် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး နိုင်ငံရေး ဖန်တီးမှုတွေ ကလည်း တစိတ်တပိုင်းပါပဲ။
ဒါအပြင် Globle warming အတွက် နိုင်ငံတကာပါဝင်လှုပ်ရှားမှုမှာ စူပါပါဝါ နိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမှု၊ အီရတ်နိုင်ငံမှ ရှိတဲ့ အမေရိကန် စစ်တပ်တွေကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းမှုတို့ကလည်း တစ်ိတ်တပိုင်းပေါ့။ ဒါအပြင် နိုင်ငံရေး အနေနဲ့ အရေးပါတဲ့ အစ္စရေးနဲ့ ပါလက်စတိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေကို အိမ်ဖြုတော်ကို ခေါ်ဆောင်ပြီး ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီ ဒေသတွေမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးတော့ မရသေးပါဘူး။ အခုလို သမတ အိုဘာမားကို နိုဘယ်ဆု ချီးမြှင့်လိုက်ခြင်းဟာ နောက်ပိုင်း သူ့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပိုမို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အားပေးအားမြှောက် ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းတခုပါပဲ။
တကယ်တော့ လည်း ဒီနည်းလမ်းက အမှန်ပဲလေ။ ပြိးခဲ့တဲ့ သမတ ဘုရ်ှကာလအတွင်းမှာ စစ်ပွဲတေ၊ွ ရန်ဆောင်မှုတေ၊ွ ပဋိပက္ခတွေ နဲ့ ရန်သူတွေ များနေတဲ့ အမေရိက ဟာ သမတ အိုဘားမား တက်လာလာခြင်း လုပ်ဆောင်လိုက်တာကတော့ အီရန်နဲ့ စကားပြောမယ် ဆိုတဲ့ ရဲတင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တခုပါပဲ။ ကမ္ဘာမှာ တင်းမာပါတယ်ဆိုတဲ့ အီရန်တို့လို နိုင်ငံတွေတောင် မင်းတင်းရင် ငါလည်းတင်းမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မမွေးပဲ စားပွဲပေါ်ကနေ အဖြေရှာဖို့ သူကြိုးစာတာပါ။
အဲဒီအထဲက တခုတည်းသော နောက်ထပ် အောင်မြင်မှုဖြစ်တဲ့ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ သံတမန်ရေးရာတွေပါ ဆက်သွယ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ၊ အကျဉ်းသားတွေ ကိုတောင် လွတ်ပေးတဲ့ အခြေအနေတွေက သမတဟောင်း ကလင်တန် လုပ်တယ်ပဲ ဆိုဆို သမတ အိုဘားမားရဲ့ လမ်းညွန်ချက်ကတော့ ရှိတာပဲပေါ့။
ဒါအပြင် အမေရိကကို အမြဲရန်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း သံတမန်ရေးရာကိစ္စတွေပါ ဆွေးနွေးလာတဲ့ အထိ ဖြစ်လာတာလဲ သမတအိုဘားမားရဲ့ စွဲဆောင်မှု တခုပါပဲ။
ဒါပေမဲ့လည်း သမတ အိုဘားမားမှာ လုပ်ကိုင်စရာတွေ အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်။ သူ့အနေနဲ့ အပေါ်က ပြောတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ အောင်မြင်ပြီးလားဆိုရင် မအောင်မြင်သေးပါဘူး။ ကြိုးစားနေဆဲပါပဲ။ လှမ်းနေဆဲပါပဲ။ ဒါဟာ အမေရိကန်ရဲ့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး မူဝါဒတွေကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားတာပါပဲ။
ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း သမတအိုဘားမားအနေနဲ့ အာဖကန်နစ္စတန်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ လုပ်ဆောင်ရဦးမှာပါ။ အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်မှုတွေကိုလည်း သူဖြေရှင်းရဦးမှာပါ။ ထို့အတူပဲ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် အနေနဲ့ ဒီထက်ပိုပြီး ပါဝင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရဦးမှာပါ။ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးတွေ မှာအောင်မြင်သလို ပြည်တွင်းမှာလည်း အဆိုးဝါးဆုံး စီးပွားရေး ချွတ်ခြုံကျမှုက လွတ်မြောက်လာပြီဆိုပေမဲ့ တိုးတက် အောင်မြင်တဲ့အထိ မရှိသေးပါဘူး။ ဘတ်ဂျက်လိုငွေ ပြမှုတွေ ကို နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် လုပ်ကိုင်ရဦးမယ်။ အလုပ်လက်မဲ့ ပြသနာတွေ ကင်းအောင်လဲ လုပ်ရဦးမှာပါ။
ဘာတွေပဲ ပြောပြော ကမ္ဘာသမိုင်းမှာ အမေရိကန်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး လူမည်း သမတ အဖြစ် သမိုင်းဝင်ခဲ့တဲ့ သမတ အိုဘားမားဟာ အခုဆိုရင် တတိယမြောက် အမေရိကန် သမတ အဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုကို လက်ခံရရှိသွားပါပြီ။
ထိုအတူပဲ မြန်မာပြည်မှာလည်း အဆင်ပြေ ချောမွေ့တဲ့ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာအောင် သမတ အိုဘားမား လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
The Sydney Morning Herald News
Posted by T T Sweet at 10:17 AM2comments: Links to this post
ကြားရ ကြားရ နားဝမသက်သာပေမဲ့ နောင်လာမဲ့ သူတွေ သိရအောင် ကြားရတဲ့ သတင်းလေး ပြောပြချင်လို့ပါ။
ဟိုတစ်နေ့ကပဲ မြန်မာ အိမ်ဖော်မလေးကို စလုံးအိမ်ရှင်တွေ နှိပ်စက်တဲ့ အကြောင်း သတင်းစာထဲ ဖတ်မိလို့မှ မကြာသေး။ ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂင်္နွေက ၂ပတ်လောက်က အသိလင်မယား ခလေးကျောင်းပို့ရင်းနဲ့ တိုပါးရိုးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကြုံခဲ့ရတာလေးပါ။ အသက် အစိတ်လောက် ခလေးမလေးတစ်ယောက် ငိုဟယ်၊ ယိုဟယ်နဲ့ ဘုန်းကြီးကို တိုင်ပြောနေတာ တွေ့သတဲ့။ ဒါနဲ့ မနေသာလို့ သွားမေးမြန်းတော့ ခလေးမလေးက စလုံးတရုတ်အိမ်ကနေ နှိပ်စက်ခံရလို့ ထွက်ပြေးလာသတဲ့။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလဲ ဗမာကျောင်းမှန်း သိလွန်းလို့ ရောက်လာတာလဲမဟုတ်။ ခြင်္သေ့ရုပ်ကြီးတွေတွေ့လို့ ဗမာပြည်ကဘုရားနဲ့တူတယ်ဆိုပြီး ဗမာတွေ့ရင် အကူအညီတောင်းမယ်ဆို ရောက်လာတာတဲ့။
ရောက်တာ ၁လပဲရှိသေးတယ်။ သူနာပြု အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီး ပွဲစားခ ၉သိန်းနဲ့လာတာပါ။ အဲဒီငွေကလဲ ထုံးစံအတိုင်း ချေးငှါးပြီးလာခဲ့ရတာပါတဲ့။ အိမ်ရှင်တွေက ထမင်းတောင် နပ်မှန်အောင် မကျွေးဘူးတဲ့။ ထမင်းဟင်းတွေဆို သူတို့ကျန်လို့ သိုးမှ ပုတ်မှစားရသတဲ့။ အတော်ကို လူမဆန်တဲ့ လူတွေပဲ။ သူတို့အတွက် ဟင်းချက်တာ မကြိုက်ရင် သံလုံးနဲ့ ခေါင်းကိုထုသတဲ့။ ခေါင်းမှာရော တခြားနေရာမှာတွေရော ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ သက်သေတွေ့ရပါတယ်တဲ့။ အိမ်က private house ဖြစ်ပြီး သူ့ကိုလဲ အိမ်ထဲမှာမထားပဲ ခြံအပြင်မှာပဲ ဒဏ်ပေးပြီးထားတယ်ဆိုလားလဲ ပြောပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သူဒီတိုင်းဆက်နေရင် လုံးပါးပါးပြီး သေတော့မှာပဲဆိုပြီး အိမ်ကနေထွက်ပြေးလာတာပါတဲ့။
အဲဒါ ဘုန်းကြီးက အကူအညီတောင်းတာနဲ့ အသိလင်မယားက သူ့ကိုခေါ်ပြီး ရဲစခန်းမှာ တိုင်ချက်ဖွင့်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေကို ရဲကို ပြပြီး တိုင်ချက်ဖွင့်တာပါ။ အသိလင်မယားက ပွဲစားကို ခေါ်အပ်ပြီး ပြန်ခါနီး လိုလိုမယ်မယ် သုံးစရာရှိသုံးရအောင် ပိုက်ဆံပေးတော့ ငြင်းပါတယ်တဲ့။ သူ့ကို အဲဒီအိမ်က ပိုက်ဆံခိုးတယ်ဆိုပြီး စွတ်စွဲခံရမှာ ကြောက်တယ်လို့ ပြောပါသတဲ့။
စလုံးမှာ ဒီလို အိမ်ဖော်ကိုနှိပ်စက်တယ် ... အိမ်ဖော်နဲ့ အိမ်ရှင်နဲ့ တုတ်တပျက်၊ဓားတပျက်၊ အိမ်ဖော်ကို မီးပူနဲ့ ကပ်လို့၊ ဆေးလိပ်မီးနဲ့တို့လို့ ၊ အိမ်ရှင်ကို အိမ်ဖော်က ဓာတ်ဆီနဲ့ မီးရှို့လို့ ... ဒီလိုဇာတ်လမ်းတွေ ကြားရဖန်များလို့ ရိုးနေပါပြီ။ အရင်က အင်ဒိုနီးရှားအိမ်ဖော်မလေးတွေ အများဆုံး ဒီပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုက မတတ်၊ လူကလဲခပ်အေးအေး၊ ခပ်နှေးနှေးလေးတွေဆိုတော့ အိမ်ရှင်စလုံးတွေက စိတ်မရှည်တော့ ဒီလိုပြသနာတွေ ဖြစ်ရတာပါ။ လူမဆန်တဲ့ သူတွေနဲ့ တွေ့တော့ ဒီ့ထက်ပိုဆိုးပေါ့။ ဖိလစ်ပင်း အိမ်ဖော်တွေက အင်္ဂလိပ်လိုလဲ ကျွမ်းတယ် ... ပိုလဲဥာဏ်ကောင်းလို့ ကြားဖူးတယ်။ သူတို့ကတော့ အိမ်ရှင်နဲ့ ပြသနာဖြစ်တာ ရှားပါတယ်။ ခုနှစ်ပိုင်းတွေမတော့ ဗမာအိမ်ဖော်လေးတွေ များလာတာနဲ့ အမျှ ကိုယ့်ဗမာလူမျိုးတွေနဲ့ ဒီလိုသတင်းတွေချည်း ကြားရတော့ ကြားရကြားရ နားဝ မသက်သာပါ။
မြန်မာပြည်မှ လာလတံ့သော အမျိုးသမီးငယ်များကိုလည်း ဒီမှာဖြစ်နေတာလေးတွေ သိရအောင်၊ ပွဲစားတွေရဲ့ အညာမခံရအောင် ဒီကသတင်းလေးတွေ မျှဝေပေးစေလိုပါတယ်။
Posted by T T Sweet at 1:28 PM4comments: Links to this post
Posted by T T Sweet at 1:45 AM7comments: Links to this post
Labels: (၁-၁၄) ကော်ပြန့်ကြော် ကန်ဇွန်းရွက်သုတ်, (၁) မြန်မာ အစားအသောက်များ ***
ကော်ပြန့်ကြော်အစာ လုပ်ရန် (လူ၃-၄ယောက်စာ ကော်ပြန့်၁၂ခုလောက်စာ)
၁။ မုံလာဥနီ ဥ အရွယ်တော် တစ်ဥ သေးသေးပါးပါးလေးတွ လှီးထားပါ။
၃။ ပဲပင်ပေါက် ပုံတွင်ကြည့်ပါ။
၄။ ကြက်သွန်မြိတ် ၅မြိတ်လောက် ပါးပါးလှီးထားပါ။
၅။ ကြက်သွန်ဖြူ ၃-၄မွှာလောက် ညက်အောင်ထောင်းထားပါ။
၆။ ငရုပ်ကောင်းမှုန့် အဖြူရောင် (white pepper) အနည်းငယ်။
၇။ ပဲငံပြာရည် အကြည်ရည်၊ ဟင်းချိုမှုန့်(စားတတ်ရင်) ၊ သင့်သလို
၈။သကြား စားပွဲဇွန်း တစ်ဇွန်း။
၉။ ဆီ စားပွဲဇွန်းတစ်ဇွန်း။
ဒယ်အိုးထဲ ဆီထည့် မီးအနေတော် ထားပါ။
ကြက်သွန်ဖြူထောင်းတာထည့်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူရွှေဝါရောင်သန်းလာရင် ခုနက လှီးချွတ်ထားတဲ့ အစာတွေထည့်ပြီးမွှေပေးပါ။ ပဲငံပြာရည်အကြည် ဟင်းချိုမှုန့် ၊ သကြား၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့် လိုသလိုထည့်ပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ သိပ်မနွမ်းခင်မှာ ချပြီး ပန်းကန်တစ်ခုနဲ့ကော်ထားပါ။ အစာကြော်က အရည်တွေ ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအရည်တွေက လိပ်လို့ မကောင်းလို့ ရေစစ်ထားရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
ကော်ပြန့်လိပ်မည့် အရွက်ကို စလုံးမှာတော NTUC တွေ စူပါမားကတ်တွေမှာရနိူင်ပါတယ်။ စမူစာ လိပ်တဲ့အရွက်နဲ့ အတူတူပါပဲ။
ကော်ပြန့်လိတ် လိတ်နည်းကို ပုံတွင်ကြည့်ပါ။ ကော်ပြန့်လိတ်တာ အဆုံးနားကျရင် ကြော်နေတုံး လိတ်တာပြေမသွားအောင် ကြက်ဥအကာရည်လေးနဲ့ သုတ်ပြီးမှ အဆုံးသတ်ကို လိတ်ပါတယ်။
Posted by T T Sweet at 11:05 PM2comments: Links to this post
Labels: (၁-၁၃) ကော်ပြန့်ကြော်, (၁) မြန်မာ အစားအသောက်များ ***
Posted by T T Sweet at 3:35 AM4comments: Links to this post
စီးပွားရေးကပ်ဆိုပြီး ချွေတာတဲ့အနေနဲ့ Orchard ဘက် shopping မထွက်ဖြစ်တာကြာပါပြီ။ အဲဒီအပတ်ကတော့ မနက်စောစော ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပြီးတော့ သမီးအဖေက အပြန်ဘယ်သွားချင်သေးလဲဆိုတော့ Orchard ဘက် မရောက်တာကြာပြီ ... ၀ယ်စရာလေးတွေလည်းရှိတယ်ဆို တစ်မိသားစုလုံး ရှော့ပင်းထွက်ကြတယ်ပေါ့။
စူပါမားကတ်ကြီးတစ်ခုမှာ ၀ယ်စရာရှိတာဝယ်ပြီး အထွက်လည်းကျရော အပေါက်ဝမှာ တီ ... တီ ... တီ .. တီ နဲ့ သူခိုးဖမ်းတဲ့ ( Shop lifting detector) စက်ကြီးက ထမြည်ပါလေရော။ Security ကလဲ ကိုယ်တို့ ၄ယောက်လုံးကို အထဲပြန်သွင်း၊ ပြီးမှ တစ်ယောက်ချင်း ပြန်စစ်မယ်ဆို ပြောပါရော။ ဒါမျိုး တစ်ခါမှလဲ မကြုံဘူးတော့ ... ကိုယ်တွေလဲ အံ့သြ လို့။ ဘေးမှာလဲ စလုံးတွေ ... ထွက်မဲ့ဟာမထွက်ကြပဲ ကိုယ်တို့ မိသားစုကို ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နဲ့ရယ် ...
ကိုယ်တို့မှာ စိတ်ထဲ ဇဝေဇ၀ါ။ တစ်ခါ ဂျူဂျူ ၂နှစ်သမီးလောက်က ခလေးလှည်းထဲ ပစ္စည်းအချို့ကောက်ထည့်လာလို့ အပြင်ရောက်လို့တွေ့မှ ပြန်သွားပေးရဘူးတယ်ဆိုတော့ အဲလိုများကောက်ထည့်သလားပေါ့။
ဒါနဲ့ Security က ပထမ ကိုယ့်ကို အရင်ထွက်ခိုင်းတယ် ... စလင်းဘက်အိပ်လွယ်ရက်ပေါ့။ အို ကေ ... ဘာသံမှ မြည်ဘူး။ သမီးအဖေရော၊ သမီးကိုရော ထွက်ခိုင်းတော့လဲ ဘာသံမှ မကြားရပြန်ဘူး။ အားလုံးပြီး နောက်ဆုံး သမီးကြီးတော်ကျတော့ စက်က တတီတီနဲ့ ထမြည်တော့တာပဲ။ ဒါနဲ့ security က လူကို မဖြတ်ခိုင်းပဲ သူလွယ်လာတဲ့ အိပ်တစ်ခုတည်း တစ်ခါဖြတ်ခိုင်းပြန်တယ်။ ဘာမှမမြည်ပြန်ဘူး။ နောက် သူလက်ကကိုင်ထားတဲ့ shopping bag တွေချည်း တစ်ခါဖြတ်ခိုင်းပြီး စစ်ပြန်ရော။ ဒီလိုနဲ့ မျိုးစုံဖြတ်ပြီး စစ်တာ သူကိုယ်တိုင် စက်ရှေ့ကဖြတ်လျှောက်မှချည်း မြည်နေတယ်။ ဒါနဲ့ သူ့ကိုပဲ ရှာကြတာ အကြာကြီး ။ နောက်ဆုံး သူ့ဖိနပ်အောက်မှာ ကြံကြံဖန်ဖန် ကပ်နေတဲ့ Barcode sensor tag လေးတွေ့တော့တာပဲ။ အဲသဟာလေး ခွာပြီးဖြတ်တော့ ဘာမှမမြည်တော့ပါခင်ဗျား။ အဲသည်ကျမှ ကိုယ်တို့မိသားစုလည်း ရယ်ကြ။ security တွေလဲ ရယ်ကြ၊ ဘေးက စလုံးပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေလဲ ၀ိုင်းရယ်ကြတော့တယ်။
ခုနကတော့ သူတို့ပဲ သများတို့ကို မသင်္ကာသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ကြည့်နေပြီးတော့များ ....
ရယ်သာရယ်ရ ... အောင့်သက်သက်ကြီးနော် ...
Posted by T T Sweet at 1:48 AM7comments: Links to this post
မြန်မာပြည်မှာတုံးက မိုးရာသီရောက်ပြီဆို မဆွိတီတို့ သူငယ်ချင်းတသိုက် လေယာဉ်ကွင်း တောထဲသွားပြီး ဖလန်တောင်ဝှေးတွေချိုး ကြော်စားကြတာမှတ်မိပါတယ်။ အဲဒီတုံးက အရင့်တွေရတာများတယ်။ အပေါ်ပိုင်း နုတာလေးတွေပဲ လှီးပြီး ကြော်စားရတာ။ သူကနဲနဲ သက်သက် ချိုချိုလေးလေးမှို့ ခံတွင်းတွေ့လှပါတယ်။ မိုးတွင်းမှသာစားရတဲ့ ရာသီစာ ဖလှန်တောင်ဝှေးပါရှင်။
အဲဒီနေ့က မဆွိတီတို့အိမ်မှာ ညနေစာ ဖလန်တောင်ဝှေးကြော်ရယ် ပုဇွန်ချဉ်သုတ်ရယ် ဘူသီးကြော် ဘယာကြော် ရယ် နဲ. ဘာအသားကြီး ငါးကြီးဟင်းမှမပါပဲ စားကြတယ် ... တစ်ခါတလေ စားလို့ကောင်းပါတယ် ...ချွေတာရေးလည်းဖြစ်ပါတယ် ...
ကြုံတုံး ဓာတ်ပုံလေး ရိုက်ထားလို. ဘယ်လိုချက်လဲ အတိုချုံးပြောပြမယ်နော် ...
၁။ဖလန်တောင်ဝှေးကို တစ်လက်မအရွယ်လေးတွေလှီးဖြတ် ငရုပ်ကျည်ပွေ့လေးနဲ. အသာထု ပြီးရင် ဆနွင်းမှုန့်လေး နဲနဲ ဆားလေးတစ်ဇွန်းလောက် ထည်.ပြီးရေ၁၅မိနစ်လောက် ရေစိမ်ပြီး ရေစစ်ထားပါ ... အစေးလေးတွေ ပျောက်အောင်ပါ ...
၂။ပုဇွန်ခြောက် ၂ဇွန်း မောက်မောက်ရယ် ကြက်သွန်နီဥကြီးတစ်လုံးလှီးထားတာရယ် ကြက်သွန်ဖြူ ၄မွှာလောက်ရယ် မျှင်ငပိ လက်၂ဆစ်စာလောက်ရယ် ငရုပ်သီးအရောင်တင်မှုန့်နဲနဲရယ် ရောပြီး ကြိတ်စက်နဲ. ကြိတ် ဒါမှမဟုတ်ထောင်းပါ...
၃။ပြီးရင် ဒယ်အိုး မီးဖိုပေါ်တင် ဆီ ၃ဇွန်းလောက်ထည့် ဆီကျက်ရင် ဆနွင်းမှုန့်လေးနဲနဲပစ်ထည့် အပေါ်ကထောင်းထားတဲ. အစာတွေထည်.ပြီး ဇွန်းနဲ.အဆက်မပျက်မွှေပြီးကြော်ပါ ...ရွေဝါရောင်သန်းပြီး မွှေးနံ့ထွက်လာရင် ဖလန်တောင်ဝှေး ထည်.ပြီး မွှေပေးပါ ...ငံပြာရည်လေးရယ် အချိုမုန့်ရယ် သင့်သလိုထည်းပြီးဆက်မွှေပါ
၄။မွှေရင်းနဲ အိုးကပ်ချင်လာရင် ခုနက ငရုပ်ဆုံဆေးရေလေးတစ်ဇွန်းစာလောက်ထည်. မွှေပြီး အဖုံးဖုံး နှပ်ထားပါ ... ရေခမ်းရင် အပေါ့အငံမြည်း လိုရင်ထပ်ထည်. ချလို့ရပါပြီ ...
ဖလန်တောင်ဝှေး အစိမ်းရောင်မပျက်ခင် ချပါ ...
ဒီမှာစားလို့ရပါပြီရှင်။ အနီးကပ်သွားရည်ကျချင်ရင်တော့ ရဲရဲကြီးသာ ကလစ်လိုက်ပါ။ ပုံကိုပြောတာပါ။
ဖလန်တောင်ဝှေးမရှိရင် Asparagus လို.ခေါ်တဲ. ကညွတ် ကိုကြော်လည်းရပါတယ် ...Asparagus ကတော. နေရာတိုင်းမှာရလိမ့်မယ်လို.ထင်ပါတယ် ...
ကြက်ဟင်းခါးသီးကြော် ကင်းပုံသီးကြော် ကြောင်လျှာသီးကြော် အားလုံး ဒီပုံစံအတိုင်းကြော်လို့ရပါတယ် ... အစာထောင်းထားတာက ကြက်ဟင်းခါးသီးဆို အရွယ်လတ် ၄လုံးစာ ကြောင်လျှာသီးဆို တစ်တောင့်စာလောက်ရှိပါတယ် ...
အခါးရေထွက်အောင် နဲနဲလေး ညှစ်ပစ်ရတာပဲ ကွာပါတယ် ...
စလုံးမှာ ဘယ်လို ဖလန်တောင်ဝှေးရလဲလို့တော့ မမေးပါနဲ့။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လက်ဆောင်ပေးလို့ပါရှင်။ သူငယ်ချင်းဘယ်လိုရလဲ မမေးပါနဲ့။ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောမှရမှာပါ။
Posted by T T Sweet at 10:14 PM7comments: Links to this post
Labels: (၃- ၉) ဖလန်တောင်ဝှေးကြော်, (၃) မြန်မာ ဟင်းများ
ဒီအကြောင်းကို တော်တော်များများသိပြီးသားပါ။ ကားမောင်းလိုင်စင်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပိုပြည့်စုံသွားအောင် ထပ်ဖြည့်ပါတယ်။
ဘယ်ကားမောင်းလိုင်စင် တွေကို ပြောင်းလို့ရသလဲ။
ယခင်မိမိနိူင်ငံမှာ လိုင်စင်ရှိပြီးသူများ Class 2B နဲ့ Class3ကိုသာ မိမိကိုင်ထားတဲ့ လိုင်စင် class ညီမျှတဲ့ စင်္ကာပူလိုင်စင်ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်။ Class4နဲ့ Class5ဆိုရင်တော့ သင်တန်းတွေပြန်တတ်၊ လက်တွေ့မောင်းပြီး စာမေးပွဲတွေဖြေရပါမယ်။ တိုက်ရိုက် ပြောင်းလို့မရပါ။ Class2က မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ Class3က ကားအသေး၊ Class4-5 က ကုန်တင်ကားတွေ အစရှိသဖြင့်ခွဲထားတာပါ။
စင်္ကာပူနိူင်ငံကို အလည်ရောက်ရှိသူများ၊ အလုပ်လုပ်သူများဟာ ရောက်ပြီး ၁၂လအထိသာ မိမိနိူင်ငံက လိုင်စင်နဲ့ ကားမောင်းခွင့်ရှိပါတယ်။ အလုပ်ကိစနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ မောင်းခွင့်မရှိပါ။ ၁၂လကျော်သွားရင်တော့ စင်္ကာပူလိုင်စင်ပြောင်းပြီးမှ မောင်းခွင့်ရှိပါတယ်။ စင်္ကာပူနိူင်ငံသားများ၊ PRများကတော့ စင်္ကာပူလိုင်စင်နဲ့သာ မောင်းခွင့်ရှိပါတယ်။
လိုင်စင်ပြောင်းဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ ။
(၁) မြန်မာပြည်မှာ ကားမောင်လိုင်စင် သက်တမ်း က စင်္ကာပူ မလာခင်အထိ တနှစ် အနည်းဆုံး ဖြစ်ရပါမယ်။
အကယ်လို့ စင်္ကာပူ ကို နိုဝင်ဘာလ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ရောက်တယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာရှိထားတဲ့ လိုင်စင်ရတာ က ယခင်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတည်းက ရထားတဲ့ သူဖြစ်ရပါမယ်။
(၂) စင်္ကာပူ နိုင်ငံမှာ စင်္ကာပူလိုင်စင်ကို ပြောင်းလဲ ကိုင်ဆောင်မယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်က လိုင်စင်ကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်ပြီး နိုတြီ လုပ်ရပါမယ်။ အဲဒီလို နိုတြီ လုပ်ပြီးကြောင်းကို မှန်ကန်တဲ့ ထောက်ခံချက်ကို နိုင်ငံခြားရေးရုံးမှာ ( MOFA) -နေပြည်တော်မှာ တံဆိပ်တုံး သွားထုရပါမယ်။
နိုင်ငံခြားရေးရုံးမှာ ( MOFA) -နေပြည်တော်မှာ တံဆိပ်တုံး သွားထု မှာတော့ ကိုယ့်လိုင်စင် က သက်တမ်း ကုန်နေလို့ မရပါ။ ပထမ လိုင်စင် သက်တမ်း တိုးဖို့တော့ လိုအပ်တာပေါ့။
(၃) စင်္ကာပူမှာBasic Theory Test ကို ဖြေဖို့ ရက်ချိန်းယူလိုက်ပါ။ ပြီးရင် သွားဖြေပါ။ အောင်မြင်တဲ့ အခါမှ အောင်မြင်တဲ့စာရွက်ရယ်။ မြန်မာပြည်လိုင်စင် အောရီဂျင်နယ်။ နိုတြီ မိုဖာ တုံးထုထားတာနဲ့စင်္ကာပူ လိုင်စင် ထုတ်လို့ ရပါတယ်။
(အချို့အချက်များမှာ မြန်မာကျူးပစ်ဖိုရမ်တွင် ကိုမောင်ခြိမ့်ရေးထားသည်ကို မှီးပါသည်)
စကားချပ် ။ ။ ကိုယ့်အနေနဲ့ ကားလဲ တကယ်မောင်းတတ်တယ်၊ အရင်ကလဲ မြန်မာပြည်မှာ လိုင်စင်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလောက်ငွေကုန်ကြေးကျခံ၊ အပင်ပန်းခံပြီး စလုံးမှာ အစအဆုံး ကားမောင်း ဘယ်သင်ပါ့ မလဲနော်။ အလွယ်လေ့းပဲ လိုင်စင်ပြောင်းလိုက်မှာပါ။ မြန်မာလိုင်စင်က ငွေပေးလုပ်လို့ ရချင်ရပေမဲ့ တကယ်မှ မမောင်းတတ်တဲ့ ကိစအတွက် အနရယ်လည်းများလွန်းလို့ တတ်အောင် အပင်ပန်းခံပြီး သင်ခဲ့တာပါရှင်။
Posted by T T Sweet at 8:50 PM2comments: Links to this post
မြန်မာ လိုင်စင်မှ စင်္ကာပူလိုင်စင်ပြောင်းလိုသော် ....